န်ဆောင်မှုများ: သုတေသနစာတမ်းများနှင့်စာအုပ်များ | ဖောင်ဒေးရှင်းကဆုချ
ပင်မစာမျက်နှာ အရင်းအမြစ်များ Published သုတေသန
အရင်းအမြစ်များဤစာမျက်နှာကိုကြှနျုပျတို့သညျဤ website ကိုအတွက်ရည်ညွှန်းအဓိကသုတေသနစာတမ်းများနှင့်စာအုပ်များ၏စာရင်းပြုစုပေးပါသည်။ အဆိုပါသုတေသနစာတမ်းများအပေါငျးတို့သညျသူတို့ကိုအချက်အလက်များ၏ယုံကြည်စိတ်ချရသောသတင်းရင်းမြစ်အောင်, သက်တူရွယ်တူ-ပြန်လည်သုံးသပ်ဂျာနယ်များထုတ်ဝေလျက်ရှိသည်။
စာတမ်းများကို ဦး ဆောင်ရေးသားသူ၏နာမည်ဖြင့်အက္ခရာစဉ်ဖြင့်စာရင်းပြုစုထားသည်။ ကျနော်တို့မူရင်း abstraction သို့မဟုတ်စာတမ်းများ၏အကျဉ်းချုပ်အဖြစ်တစ်ခုလုံးစက္ကူရရှိရန်မည်သို့အကြံပြုချက်များပါဝင်သည်။
Ahn HM, Chung HJ နဲ့ Kim SH ။ အတွေ့အကြုံဂိမ်းကစားခြင်းပြီးနောက်ဂိမ်းတွေကိုမှဦးနှောက် reactivity ပြောင်းလဲ in Cyberpsychology, အပြုအမူနှင့်လူမှုကွန်ယက်အဖွဲ့, 2015 သြဂုတ်; 18 (8): 474-9 ။ Doi: 10.1089 / cyber.2015.0185 ။
အင်တာနက်ကဂိမ်းကစားသူကိုတစ်ဦးချင်းစီအလွန်အကျွံဂိမ်း-related တွေကိုမှမွငျ့မားသောဦးနှောက် reactivity ကိုပြသပါ။ ဒီလေ့လာမှုကဂိမ်းကစားသူအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိဒီမွငျ့မား cue reactivity ကိုအင်တာနက်ကဂိမ်းထပ်ခါတလဲလဲထိတွေ့မှု၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်ရှိမရှိစမ်းသပ်ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အလွန်အကျွံအင်တာနက်ကိုဂိမ်းကစားတဲ့သမိုင်းမရှိဘဲကျန်းမာနုပျိုလူကြီးများစုဆောင်းခဲ့ကြသည်, သူတို့ငါးယောက်ဆက်တိုက်ရက်များအတွက်2နာရီ / ရက်များအတွက်အွန်လိုင်းမှအင်တာနက်ကိုဂိမ်းကစားရန်ညွှန်ကြားခဲ့သည်။ နှစ်ဦးကိုထိန်းချုပ်အုပ်စုများအသုံးပြုခဲ့ကြသည်: တစ်စိတ်ကူးယဉ်တီဗီဒရာမာကြည့်ရှုအားပေးသည့်ဒရာမာအုပ်စုနှင့်မျှစနစ်တကျထိတွေ့ခံသောမထိတွေ့အုပ်စု။ အားလုံးသင်တန်းသားများကိုထိတွေ့အစည်းအဝေးများမတိုင်မီနှင့်နောက်ပိုင်းနှစ်ဦးစလုံးသည်ဦးနှောက်စကင်နာအတွက် cue reactivity ကိုဂိမ်း, ဒရာမာနှင့်အတူတာဝန်နှင့်ကြားနေတွေကိုဖျော်ဖြေခဲ့ပါတယ်။ အဆိုပါဂိမ်းအုပ်စုသည်လက်ျာ ventrolateral prefrontal cortex (VLPFC) တွင်တွေကိုဂိမ်းတစ်ခုတိုးလာ reactivity ကိုပြသခဲ့သည်။ VLPFC activation တိုး၏ဒီဂရီအပြုသဘောဂိမ်းအဘို့အလိုဆန္ဒအတွက် Self-အစီရင်ခံတိုးဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ အဆိုပါဒရာမာအဖွဲ့ caudate အတွက်ဒရာမာဇာတ်ကားတွေကို presentation ကိုတုံ့ပြန်, posterior cingulate နှင့် precuneus တစ်ခုတိုးလာ cue reactivity ကိုပြသခဲ့သည်။ ရလဒ်ကအင်တာနက်ဂိမ်းများကိုသို့မဟုတ်တီဗီဇာတ်လမ်းတွဲတွေဖြစ်စေထိတွေ့သီးခြားထိတွေ့မှုနှင့်ဆက်စပ်အမြင်အာရုံတွေကိုရန် reactivity ကို elevates ကဖော်ပြသည်။ အတိအကျမြင့်ပုံစံများ, သို့သော်, မီဒီယာအမျိုးအစားပေါ် မူတည်. ကွဲပြားဖို့ပေါ်လာခဲ့ရတယျ။ အဆိုပါဒေသတစ်ခုချင်းစီအတွက်မည်သို့အပြောင်းအလဲများရောဂါဗေဒတဏှာရမ်းနေတဲ့အနာဂတ် longitudinal လေ့လာမှုဖို့တိုးတက်မှုကိုအထောက်အကူပြု။
ဤအကြောင်းအရာသည်တစ်ဦး paywall နောက်ကွယ်မှဖြစ်ပါသည် ဒီမှာ။ မြင် ငါဘယ်လိုသုတေသနမှဝင်ရောက်ခွင့်ရပါသလဲ? လက်လှမ်းအကြောင်းကိုအကြံပြုချက်များသည်။
Baumeister RF နှင့် Tierney ဂျေ 2011 Willpower: အကြီးမြတ်ဆုံးလူ့အစွမ်းသတ္တိကိုပြန်လည်ဖော်ထုတ် ပင်ဂွင်းနှိပ်ပါ။ ဤစာအုပ်ဝယ်ယူနိုင်ပါသည် ဒီမှာ.
Beyens ငါ Vandenbosch L ကိုနှင့် Eggermont S က Pubertal Timing, Sensation ရှာနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးစောစောဆယ်ကျော်သက်အရွယ် Boys ရဲ့ Exposure in အစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ်နိုဝင်ဘာ 2015 vol ။ အဘယ်သူမျှမ 35 ။ 8 1045-1068 ။ (ကျန်းမာရေး)
သုတေသနမြီးကောင်ပေါက်မှန်မှန်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသရုပ်ပြခဲ့သည်။ (က) pubertal အချိန်ကိုက်နှင့်အာရုံခံစားမှုရှာနှင့်အတူဆက်ဆံရေးမှာကြည့်ခြင်းအားဖြင့်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းဖို့သူတို့ရဲ့ထိတွေ့မှုကရှင်းပြသည်, နှင့် (ခ) မူထသော, ဒါက Two-လှိုင်း panel ကိုအစောပိုင်းဆယ်ကျော်သက်ယောက်ျားလေးများအတွက် Integrated မော်ဒယ်စမ်းသပ်ဖို့ရည်ရွယ်လေ့လာမှု (N ကို = 14.10 မာဂုပညာရှိ = 325) သူတို့ရဲ့ပညာရေးစွမ်းဆောင်မှုများအတွက်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းဖို့သူတို့ရဲ့ထိတွေ့မှု၏အလားအလာအကျိုးဆက်စူးစမ်း။ သမာဓိလမ်းကြောင်းကိုမော်ဒယ် pubertal အချိန်ကိုက်နှင့်အာရုံခံစားမှုကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုဟောကိန်းထုတ်ရှာကြံကြောင်းညွှန်ပြ။ တစ်ခုအဆင့်မြင့် pubertal ဇာတ်စင်နှင့်ပိုပြီးမကြာခဏအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသောရှာကြံအာရုံခံစားမှုအတွက်မြင့်မားသောယောက်ျားလေးများနှင့်အတူယောက်ျားလေးများ။ ထို့အပြင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းတစ်ခုတိုးလာအသုံးပြုမှုနောက်ပိုင်းတွင်ယောက်ျားလေးများ '' ပညာရေးစွမ်းဆောင်ရည်6လအတွင်းလျော့နည်းသွားသည်။ အဆိုပါဆွေးနွေးမှုတွင်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအပေါ်အနာဂတ်သုတေသနအဘို့ဤ Integrated မော်ဒယ်၏အကျိုးဆက်များအပေါ်အာရုံစိုက်။
တံတားများ AJ, Wosnitzer R ကို, Scharrer အီး, Sun ကကို C, Liberman R ကို ရောင်းအားအကောင်းဆုံးညစ်ညမ်းဗီဒီယိုများအတွက်ကျူးကျော်များနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ: အကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ update ကို in အမျိုးသမီးများအပေါ်အကြမ်းဖက်မှုဆိုင်ရာ။ 2010 အောက်တိုဘာ; 16 (10): 1065-85 ။ Doi: 10.1177 / 1077801210382866 ။ (ကျန်းမာရေး)
ယခုလေ့လာမှုသည်လူကြိုက်များသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများဗီဒီယိုများ၏အကြောင်းအရာများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ။ ကျူးကျော်ခြင်း၊ ပျက်စီးခြင်းနှင့်လိင်ဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များပုံဖော်ခြင်းနှင့်လေ့လာမှု၏ရလဒ်များကိုယခင်အကြောင်းအရာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာလေ့လာမှုများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ခြင်းတို့၏ရည်ရွယ်ချက်များနှင့်အတူဆန်းစစ်ထားသည်။ တွေ့ရှိချက်များအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများအားနှုတ်ဖြင့်ရောရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရရောကျူးကျော်မှုမြင့်မားကြောင်းဖော်ပြသည်။ ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာထားသောမြင်ကွင်း ၃၀၄ ခုတွင် ၈၈.၂% တွင်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးကျော်ခြင်း၊ အဓိကအားဖြင့်ရိုက်ခြင်း၊ ငိုက်ခြင်းနှင့်ရိုက်ခြင်းတို့ပါဝင်သည်။ ၄၈.၇% တွင်နှုတ်ဖြင့်ကျူးကျော်ခြင်း၊ အဓိကအားဖြင့်အမည်ခေါ်ခြင်း။ ကျူးကျော်ကျူးလွန်သူများသည်များသောအားဖြင့်အမျိုးသားများဖြစ်ကြသည်။ အများဆုံးပစ်မှတ်များမှာအများအားဖြင့်ပျော်ရွှင်မှုရှိကြောင်းသို့မဟုတ်ကျူးကျော်မှုကိုကြားနေတုံ့ပြန်ခဲ့သည်။
Cheng က S, Ma J ကိုနှင့် Missari S က ထိုင်ဝမ်ဆယ်ကျော်သက် '' ပထမဦးဆုံးစိတ်ကူးယဉ်ခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးအပေါ်ကိုအင်တာနက်အသုံးပြုမှုများ၏သက်ရောက်မှုများ in အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူမှုဗေဒ ဇူလိုင်လ 2014, vol ။ 29 မရှိ။ 4, စစ 324-347 ။ Doi: 10.1177 / 0268580914538084 ။ (ကျန်းမာရေး)
အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်ဆက်သွယ်ရေးကွန်ရက်တိုးမြီးကောင်ပေါက် '' လူမှုရေးဘဝတွေကို၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ပထမဦးဆုံးအရင်ခုန်စရာကြားဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်: ဒီလေ့လာမှုနှစ်ခုအရေးကြီးသောဆယ်ကျော်သက်လူမှုရေးအပြုအမူတွေအပေါ်ထိုင်ဝမ်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုများ၏လွှမ်းမိုးမှုကို examine ။ ထိုင်ဝမ်လူငယ်စီမံကိန်း (TYP), 2000-2009 ကနေဒေတာတွေကိုအသုံးပြုခြင်း, အဖြစ်အပျက်သမိုင်းကြောင်းဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်း၏ရလဒ်များကိုပညာရေးဆိုင်ရာရည်ရွယ်ချက်များအတွက်မြီးကောင်ပေါက် '' အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အင်တာနက်ကို အသုံးပြု. သော်လည်း, မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးရင်ခုန်စရာကြားဆက်ဆံရေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်ရှိခြင်း၏နှုန်းထားများလျော့ကျစေပါတယ်ကြောင်းအကြံပြု လူမှုရေးကွန်ရက်များအတွက်, အင်တာနက်ဆိုင်များသို့သွားရောက်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များအတွက်နှုန်းထားများတိုးမြှင့် surfing ။ မြီးကောင်ပေါက် '' ရင်းနှီးအတွေ့အကြုံများပေါ်ဤအကြောင်းအင်တာနက်ပေါ်ကလုပ်ဆောင်မှုများ၏သက်ရောက်မှုများအတွက်ကျားမကွဲပြားခြားနားမှုရှိပါတယ်။ Logistic သည်အင်တာနက်လှုပ်ရှားမှုများလည်းမြီးကောင်ပေါက်တစ်ဦးပထမဦးဆုံးရင်ခုန်စရာကြားဆက်ဆံရေးရှေ့တော်၌လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်ရှိသည်ရှိမရှိများ၏ဖြစ်နိုင်ခြေကိုထိခိုက်စေသည်ဟုထပ်မံပြသလေ့လာဆန်းစစ်။ ဤအတွေ့ရှိချက်များ၏သက်ရောက်မှုနိဂုံးထဲမှာဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
ဤအကြောင်းအရာသည်တစ်ဦး paywall နောက်ကွယ်မှဖြစ်ပါသည် ဒီမှာ။ မြင် ငါဘယ်လိုသုတေသနမှဝင်ရောက်ခွင့်ရပါသလဲ? access ကိုနှင့်ပတ်သက်။ အကြံပြုချက်များအဘို့။ "> ဒီမှာ။
ရော့စ်ဒန်ကလေ, ဗစ်တိုးရီးယား 2015 သင့်ကလေး၏ ဦး နှောက်ကိုပြန်လည်သတ်မှတ်ပါ - လျှပ်စစ်ပြတ်တောက်မှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုပြောင်းပြန်ပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်အရည်ပျော်မှုများကိုအဆုံးသတ်ရန်၊ အဆင့်မြင့်ရန်နှင့်လူမှုရေးစွမ်းရည်မြှင့်တင်ရန်လေးပတ်စီမံကိန်း။ Paperback ။ ကမ္ဘာသစ်စာကြည့်တိုက် ISBN-10: 1608682846
မိဘများ၏တိုးပွားလာနံပါတ်များကိုသိသာအကြောင်းပြချက်မရှိဘဲထွက်သရုပ်ဆောင်ကြသူကလေးများနှင့်အတူထွေး။ အဲဒီကလေးတွေထဲကအတော်များများ ADHD, စိတ်ကြွ, ဒါမှမဟုတ်အထီးကျန်စိတ်ဝေဒနာ spectrum ကိုမမှန်ရောဂါနေကြသည်။ သူတို့ဟာပြီးတော့မကြာခဏဆိုသလိုဆင်းရဲသားများနှင့်ဘေးထွက်သက်ရောက်မှု-နှက်ရလဒ်များကိုနှင့်အတူဆေးနေကြသည်။ ဗစ်တိုးရီးယား Dunckley ယခင်ကုသမှုကိုတုံ့ပြန်ရန်ပျက်ကွက်ခဲ့ကြပြီးသစ်တစ်ခုအစီအစဉ်ကိုရှေ့ဆောင်သူကလေးများနှင့်မိသားစုများနှင့်အတူအလုပ်လုပ်အတွက်အထူးပြုသည်။ 500 ထက်ပိုကလေးများ, ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်စိတ်ရောဂါမမှန်ရောဂါငယ်ရွယ်လူကြီးများနှင့်အတူသူမ၏အလုပ်များတွင် 80 ရာခိုင်နှုန်းကိုဒီနေရာမှာတင်ပြလေးပါး-တပတ်အစီအစဉ်တွင်သိသိသာသာတိုးတက်မှုပြသခဲ့သည်။ ဗီဒီယိုဂိမ်း, Laptop, ဆဲလ်ဖုန်းနှင့် tablet များအပါအဝင် interactive ဖန်သားပြင်, ကျော်ကလေးတစ်ဦး s ကိုဦးနှောက်အာရုံကြောစနစ်လှုံ့ဆော်ခြင်း။ ဒီနေ့ရဲ့ချိတ်ဆက်ကမ်ဘာပျေါတှငျအဘယ်သူမျှမလုံးဝအီလက်ထရောနစ်လှုံ့ဆော်မှုရှောင်နိုင်ပါတယ်နေစဉ်, Dunckley ကျွန်တော်တို့ကိုကြားအရှိဆုံးအားနည်းချက်နှင့်သူတို့၏ထိခိုက်သက်ရောက်မှုများနှမြောသင့်သည်နိုငျပုံကိုပြသ
Gouin JP, Carter က S နဲ့, Pournajafi-Nazarlooc H ကို, Glaser R ကို, Malarkey သည့် WB, တီဂျေ, Stowell J ကိုနှင့် Kiecolt-Glaser JK မေတ္တာရှင် အိမ်ထောင်ရေးအပြုအမူ, oxytocin, Vasopressin နှင့်အနာကျက် in Psychoneuroendocrinology။ 2010 သြဂုတ်လ; 35 (7): 1082-1090 ။ Doi: 10.1016 / j.psyneuen.2010.01.009 ။ (ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး)
တိရိစ္ဆာန်လေ့လာမှုများ oxytocin နှင့် vasopressin လူမှုရေး Bond အတွက်ဇီဝကမ္မစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှုများနှင့်ဒဏ်ရာအနာရောဂါငြိမ်းစရာပတ်သက်သည်ဟုယူဆရပါပြီ။ လူသားမြားသညျတှငျ, endogenous oxytocin နှင့် vasopressin အဆင့်ဆင့်ဆက်ဆံရေးဟာအရည်အသွေး, အိမ်ထောင်ရေးအပြုအမူတွေနှင့်ဇီဝကမ္မစိတ်ဖိစီးမှုတုံ့ပြန်မှု၏သဘောထားအမြင်နှင့်အတူ covary ။ , အိမ်ထောင်ရေးအပြုအမူအကြားဆက်ဆံရေးကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးရန် oxytocin, vasopressin နှင့်ဒဏ်ရာအနာများနှင့်အမြင့်ဆုံး neuropeptide အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ၏အသွင်ပြင်လက္ခဏာများကိုဆုံးဖြတ်ရန်စေရန်, 37 စုံတွဲများတစ်ဦးဆေးရုံသုတေသနယူနစ်အတွက် 24 နာရီခရီးစဉ်ဝန်ခံခဲ့သည်။ သေးငယ်တဲ့အဖုအနာဒဏ်ရာများကိုသူတို့ရဲ့လက်ဖျံပေါ်မှာဖန်တီးခဲ့ကြပြီးနောက်မောင်နှံစုံကိုစနစ်တကျလူမှုရေးထောက်ပံ့မှုကိုအပြန်အလှန် task ထဲမှာပါဝင်ခဲ့။ အဖုအနာက်ဘ်ဆိုက်များဒဏ်ရာပြုပြင်မြန်နှုန်းအကဲဖြတ်ရန်အောက်ပါဥတုနေ့စဉ်စောင့်ကြည့်ခဲ့ကြသည်။ သွေးနမူနာ oxytocin, vasopressin နှင့် cytokine ဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းများအတွက်စုဆောင်းခဲ့ကြသည်။ ပိုမိုမြင့်မားသော oxytocin အဆင့်ဆင့်ဟာစနစ်တကျအပြန်အလှန်တာဝန်စဉ်အတွင်းပိုပြီးအပြုသဘောဆောင်တဲ့ဆက်သွယ်ရေးအပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင်အထက် oxytocin quartile အတွက်တစ်ဦးချင်းစီပိုမြန်အောက်ပိုင်း oxytocin quartiles အတွက်သင်တန်းသားများကိုထက်အဖုအနာဒဏ်ရာများအနာကိုငြိမ်းစေ။ ပိုမိုမြင့်မားသော vasopressin အဆင့်ဆင့်နည်းပါးလာအနုတ်လက္ခဏာဆက်သွယ်ရေးအပြုအမူနှင့်ပိုမိုအကျိတ် necrosis အချက်-αထုတ်လုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကြသည်။ ထို့ပြင်အထက် vasopressin quartile များတွင်အမျိုးသမီးများ၏ပိုမိုမြန်ဆန်နမူနာ၏ကျန်ရှိသောထက်စမ်းသပ်ဒဏ်ရာများအနာကိုငြိမ်းစေ။ ဤရွေ့ကား data တွေကိုအတည်ပြုခြင်းနှင့်စုံတွဲများ '' အပြုသဘောနှင့်အပျက်သဘောဆက်သွယ်ရေးအပြုအမူတွေအတွက်ကြိုတင်သက်သေအထောက်အထား implicating oxytocin နှင့် vasopressin တိုးချဲ့နှင့်လည်းအရေးပါသောကျန်းမာရေးရလဒ်အတွက်၎င်းတို့၏အခန်းကဏ္ဍများထပ်မံသက်သေအထောက်အထားများကိုပေးစွမ်းသည်အနာပျောက်စေသောအနာ။
ဂျွန်ဆင်ဝန်ကြီးချုပ်နှင့် Kenny PJ အဝလွန်ကြွက်များတွင်စွဲတူသောဆုလာဘ်ကမောက်ကမဖြစ်မှုနှင့် compulsive စား: dopamine D2 receptors များအတွက်အခန်းက္ပ in သဘာဝတရားအာရုံကြောသိပ္ပံ။ 2010 မေလ; 13 (5): 635-641 ။ 2010 မတ်လ 28 အွန်လိုင်းထုတ်ဝေသည်။ Doi: 10.1038 / nn.2519
ကျနော်တို့အဝလွန်ခြင်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုတစ်တဖြည်းဖြည်းဆိုးရွားလာနေသောဦးနှောက်ကိုဆုလာဘ်လိုငွေပြမှု၏ပေါ်ပေါက်ရေးနှင့်အတူဒွန်တွဲခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ကိုကင်းသို့မဟုတ်ဘိန်းဖြူအားဖြင့်သွေးဆောင်ဆုလာဘ် homeostasis တွင်ပုံစံတူစာပိုဒ်အပြောင်းအလဲများကိုပေါ့ပေါ့ထံမှ compulsive မူးယစ်ဆေး-ဆည်းပူးနေရန်အကူးအပြောင်းအတွက်အရေးကြီးသည့်ခလုတ်စဉ်းစားသည်။ ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့အဝလွန်အတွက် compulsive ကဲ့သို့နို့တိုက်ကျွေးရေးအပြုအမူတွေ့ရှိပေမယ့်တစ်ဦးဆန္ဒရှိ conditional လှုံ့ဆော်မှုအားဖြင့်နှောင့်အယှက်မှခံနိုင်ရည်ခဲ့ကြောင်းအရေးပါတယ်လို့အစားအစာစားသုံးမှုအဖြစ်တိုင်းတာကြွက်, အမှီမပြု။ Striatal dopamine D2 receptors (D2R) လူ့မူးယစ်ဆေးစွဲအတွက်ယခင်အစီရင်ခံစာများအဆင်တူ, အဝလွန်ကြွက်များတွင် downregulated ခဲ့ကြသည်။ ထိုမှတပါး, striatal D2R ၏ lentivirus-mediated knockdown လျှင်မြန်စွာစွဲတူသောဆုလာဘ်လိုငွေပြမှု၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အရေးပါတယ်လို့ High-အဆီအစားအစာမှတိုးချဲ့ဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူကြွက်များတွင်ရှာကြံ compulsive ကဲ့သို့အစားအစာစတင်ခြင်းအရှိန်။ ဤရွေ့ကားဒေတာအရေးပါတယ်လို့အစားအစာ overconsumption ဦးနှောက်ဆုလာဘ် circuitries အတွက်စွဲတူသော neuroadaptive တုံ့ပြန်မှုကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်းနှင့် compulsive စား၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကိုမောင်းနှင်ကြောင်းဆန္ဒပြခဲ့ကြသည်။ ဘုံ hedonic ယန္တရားများထို့ကြောင့်အဝလွန်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးစွဲအခြေခံလိမ့်မည်။
ဂျွန်ဆင် ZV နှင့်လူငယ် LJ လက်ရှိထင်မြင်ချက်အတွက်လူမှုရေးကို attachment နဲ့ pair တစုံဘွန်း၏ Neurobiological ယန္တရားများ in အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ။ 2015 ဇွန်; 3: 38-44 ။ Doi: 10.1016 / j.cobeha.2015.01.009 ။ (ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး)
မျိုးစိတ်ဟာသူတို့ရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာရွေးချယ်တပ်ဖွဲ့များမှတုံ့ပြန်မှုအတွက်ကွဲပြားခြားနားလူမှုရေးအပြုအမူများနှင့်မိတ်လိုက်မဟာဗျူဟာပြောင်းလဲပါပြီ။ ကရာအများဆုံးကျောရိုးရှိသတ္တဝါ taxa ဖြတ်ပြီးမြင်သာထင်သာမိတ်လိုက်နည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်နေစဉ်, monogamous မိတ်လိုက်စနစ်များ convergence ဆင့်ကဲဝေးလံနွယ်ကိုဖြတ်ပြီးအကြိမ်ပေါင်းများစွာဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ Monogamous အပြုအမူတစ်ခုမိတ်လိုက်ဖက်အတူရွေးချယ်လူမှုရေး attachment များကို, ဒါမှမဟုတ်တစ်စုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်ဖွဲ့စည်းရန်ထိန်းသိမ်းနည်းတစ် neurobiological စွမ်းရည်အားဖြင့် facilitated ခံရဖို့စဉ်းစားထားသည်။ pair တစုံဘွန်းအပြုအမူများ၏အာရုံကြောယန္တရားများကွဲပြားခြားနားလူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းများပြပေးသော Microtine ကြွက်များတွင်အများဆုံးအသေးစိတ်စုံစမ်းစစ်ဆေးပြီ။ ဒီလေ့လာမှုတွေကအဓိကကျတဲ့ကဏ္ဍဖွဲ့စည်းရေးအတွက်အချက်များ, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုများနှင့် pair တစုံခံရသောချည်နှောင်ခြင်းကြောင့်၏စကားရပ်အဖြစ် mesolimbic dopamine လမ်းကြောင်း, လူမှုရေး neuropeptides (oxytocin နှင့် vasopressin), နှင့်အခြားအာရုံကြောစနစ်များကိုမီးမောင်းထိုးပြကြပြီ။
Kastbom, AA ကို, Sydsjö, G, Bladh M က, Priebe, G နှင့် Svedin CG လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက် 14 များ၏အသက်အရွယ်ဆင်းရဲတဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်နောက်ပိုင်းတွင်အသက်တာ၌အန္တရာယ်များအပြုအမူမှဦးဆောင်မတိုင်မီ in Acta Paediatrica, အတှဲ 104, Issue 1, စာမျက်နှာ 91-100 ဇန်နဝါရီလ 2015 ။ Doi: 10.1111 / apa.12803 ။ (ကျန်းမာရေး)
ရည်ရွယ်ထား: ဒီလေ့လာမှုအသက်နှင့်လူမှုအသက်အပိုင်းအခြား၏ 14 နှစ်ပေါင်းမတိုင်မီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်အကြားဆက်ဆံရေးဟာ, လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံ, ကျန်းမာရေး, အသက် 18 နှစ်ပေါင်းမှာကလေးကအလွဲသုံးစားမှုများနှင့်အမူအကျင့်များအတွေ့အကြုံကိုစုံစမ်းစစ်ဆေး။
နည်းလမ်းများ: 3432 ဆွီဒင်အထက်တန်းကျောင်းကျကွီးရှယျအိုမြား၏နမူနာ 18 ၏အသက်အရွယ်မှာလိင်, ကျန်းမာရေးနှင့်အလွဲသုံးစားမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးစစ်တမ်းတစ်ခုပြီးစီးခဲ့သည်။
ရလဒ်များ: အစောပိုင်းပွဲဦးထွက်အပြုသဘောထိုကဲ့သို့သောထိုကဲ့သို့သောအကြမ်းဖက်ဖြစ်ခြင်းသဘောကိုမုသာ, ခိုးယူခြင်းနှင့်အဖြစ်မိတ်ဖက်, ပါးစပ်နှင့်စအိုလိင်ဆက်ဆံ၏အတွေ့အကြုံ, ထိုကဲ့သို့သောဆေးလိပ်သောက်, မူးယစ်ဆေးဝါးနှင့်အရက်သေစာသုံးစွဲခြင်းနှင့် antisocial အပြုအမူအဖြစ်ကျန်းမာရေးအပြုအမူတွေ, ၏နံပါတ်အဖြစ်အန္တရာယ်များအပြုအမူတွေ, ဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည် အိမ်ကနေအပြေး။ အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်နှင့်အတူမိန်းကလေးများလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုသိသိသာသာပိုပြီးအတွေ့အကြုံရှိခဲ့သညျ။ အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်နှင့်အတူယောက်ျားလေးများလိင်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုရောင်းအတူတကွလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုများစွာအတွေ့အကြုံနှင့်အတူ, ကွက်တိဝင်, အနိမ့်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်တန်ဖိုးထားသူနှင့်ဆင်းရဲသောသူတို့သည်စိတ်ကျန်းမာရေး၏အားနည်းအသိရှိသည်ဖို့ကပိုဖွယ်ရှိခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးကမျိုးစုံ Logistic ဆုတ်ယုတ်မော်ဒယ်အသက် 18 နှစ်ပေါင်းမှာ antisocial လုပ်ရပ်များနှင့်ကျန်းမာရေးအပြုအမူတွေ၏နံပါတ်သိသိသာသာကျန်ရစ်ပေမယ့်အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်စိတ်ရောဂါလက္ခဏာတွေအန္တရာယ်ကိုတိုးပွားစေမနိမ့် Self-လေးစားမှုသို့မဟုတ်ကွက်တိဝင်များ၏အနိမ့်အဓိပ်ပာခဲ့တယျ။
နိဂုံး: အစောပိုင်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်အကြာတွင်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်စဉ်အတွင်းပြဿနာအပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်, ဤအားနည်းချက်မိဘများနှင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုပေးသူမှအာရုံလိုအပ်ပါတယ်ခဲ့သည်။
ko CH, လျူ TL, ဝမ် PW, Chen က CS, ယန်း CF နှင့်ယန်း JY မြီးကောင်ပေါက်အကြားအင်တာနက်စွဲ၏သင်တန်းတွင်စိတ်ကျရောဂါ, ရန်လိုမုန်းတီးမှုများနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ exacerbation: တစ်အလားအလာလေ့လာမှု in ဘက်စုံစိတ်ရောဂါကုသမှု Volume ကို 55, Issue 6, စာမျက်နှာများ 1377-1384 ။ EPub 2014 မေလ 17 ။ Doi: 10.1016 / j.comppsych.2014.05.003 ။ (ကျန်းမာရေး)
နောက်ခံ: ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းဆယ်ကျော်သက်ကလေးကိုလူဦးရေအတွက်, အင်တာနက်စွဲပျံ့နှံ့နေတဲ့သည်နှင့်မကြာခဏစိတ်ကျရောဂါ, ရန်လိုမုန်းတီးမှုများနှင့်မြီးကောင်ပေါက်များ၏လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အတူ comorbid ဖြစ်ပါတယ်။ အင်တာနက်စွဲလမ်းရတဲ့သို့မဟုတ်မြီးကောင်ပေါက်အကြားအင်တာနက်စွဲခြင်းမှ remitting ၏သင်တန်းတွင်စိတ်ကျရောဂါ, ရန်လိုမုန်းတီးမှုများနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှု၏ exacerbation အကဲဖြတ်ရည်ရွယ်ဒီလေ့လာမှုက။
METHOD: ဒီလေ့လာမှုဟာသူတို့ရဲ့စိတ်ကျရောဂါ, ရန်လိုမုန်းတီးမှု, လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းအကဲဖြတ်ရန်တန်း 2,293 အတွက်7မြီးကောင်ပေါက်စုဆောင်း။ တူညီသောအကဲဖြတ်တစ်နှစ်အကြာတွင်ထပ်ခါတလဲလဲခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါဖြစ်ပွားမှုအုပ်စုသည်ပထမဦးဆုံးအကဲဖြတ်နှင့်ဒုတိယအကဲဖြတ်အတွက်စွဲအဖြစ် Non-စွဲအဖြစ်ခွဲခြားဘာသာရပ်များအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။ အဆိုပါလွှတ်အုပ်စုသည်ပထမဦးဆုံးအကဲဖြတ်နှင့်ဒုတိယအကဲဖြတ်အတွက် Non-စွဲအဖြစ်စွဲအဖြစ်ခွဲခြားဘာသာရပ်များအဖြစ်သတ်မှတ်ခံခဲ့ရသည်။
ရလဒ်: အဆိုပါဖြစ်ပွားမှုအုပ်စုသည် non-စွဲအုပ်စုတစ်စုထက်တိုးမြှင့်စိတ်ကျရောဂါနှင့်ရန်လိုမုန်းတီးမှုကိုပိုမိုပြသခြင်းနှင့်စိတ်ကျရောဂါ on ရဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးများအကြားပိုမိုအားကောင်းခဲ့သည်။ ထို့ပြင်အဆိုပါလွှတ်အုပ်စုသည်စိတ်ကျရောဂါ, ရန်လိုမုန်းတီးမှုများနှင့်မြဲစွဲအုပ်စုတစ်စုထက်ပိုလူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုလျော့နည်းသွားပြသခဲ့သည်။
နိဂုံးချုပ်: မြီးကောင်ပေါက်အကြားကအင်တာနက်များအတွက်စွဲလုပ်ငန်းစဉ်များတွင်ပိုမိုဆိုးဝါးလာစီးပွားပျက်ကပ်နှင့်ရန်လိုမုန်းတီးမှု။ အင်တာနက်စွဲ၏ကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေးစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးအပေါ်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုတားဆီးပေးသင့်ပါတယ်။ စီးပွားပျက်ကပ်, ရန်လိုမုန်းတီးမှုများနှင့်လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်လွှတ်၏လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်လျော့နည်းသွားသည်။ ဒါဟာအင်တာနက်ကိုစွဲလမ်းတိုတောင်းတဲ့ကြာချိန်အတွင်းမှာလွတ်နိုင်လျှင်အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များပြောင်းပြန်နိုင်ကြောင်းအကြံပြုသည်။
Kühn, S နှင့် Gallinat J ကို ဦးနှောက်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်အတူ Functional ဆက်သွယ်မှု Associated: Porn အပေါ်ဦးနှောက် in ဂျေအေအမ်အေစိတ်ရောဂါကုသမှု. 2014; 71(7):827-834. doi:10.1001/jamapsychiatry.2014.93.
အရေးပါမှု: ညစ်ညမ်း, အင်တာနက်ပေါ်တွင်အသုံးပြုနိုင်စွမ်း, တတ်နိုင်ထင်ရှားလျက်, အမြင်အာရုံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုစားသုံး၏အမည်ဝှက်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်အသုံးပြုသူသန်းပေါင်းများစွာကိုဆွဲဆောင်ခဲ့ကြပြီးကတည်းက။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုဝံဆုလာဘ်-ရှာကြံအပြုအမူ, အသစ်အဆန်း-ရှာကြံအပြုအမူများနှင့်စွဲလမ်းအပြုအမူနှင့်အတူ resemblance သောယူဆချက်အပေါ်အခြေခံပြီးကျနော်တို့မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်အတွက် frontostriatal ကွန်ယက်ကိုပြောင်းလဲတွေးဆ။
Objective: မကြာခဏညစ်ညမ်းစားသုံးမှုဟာ frontostriatal ကွန်ယက်ကိုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ရှိမရှိဆုံးဖြတ်ရန်ရန်။
ဒီဇိုင်းချိန်ညှိခြင်းနှင့်ဘာလင်, ဂျာမနီလူ့ဖွံ့ဖြိုးရေးများအတွက်မက် Planck အင်စတီကျုမှာကောက်ယူမယ့်လေ့လာမှုများတွင်ပါဝင်, ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏ကျယ်ပြန့ဖုံးအုပ် 64 ကျန်းမာအထီးလူကြီးများတစ်ပတ်ကိုညစ်ညမ်းစားသုံးမှုနာရီသတင်းတွင်ဖော်ပြသည်။ ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအာရုံကြောတည်ဆောက်ပုံ, အလုပ်တခုကို-related activation နှင့် functional ဖြစ်စေငြိမ်ဝပ်ရာပြည်နယ်ဆက်သွယ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
ဦးနှောက်ရဲ့အဓိကရလဒျနှင့်ဆောင်ရွက်ချက်များ Grey ကကိစ္စအသံအတိုးအကျယ် voxel-based morphometry ဖြင့်တိုင်းတာနှင့်ပြည်နယ် functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှု 3-T ကသံလိုက်ပဲ့တင်ရိုက်ခတ်မှုပုံရိပ် Scan ဖတ်ပေါ်တိုင်းတာခဲ့သည်အနားယူခဲ့သည်။
ရလဒ်များကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်ပတ်လျှင်ဖော်ပြသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေနာရီနှင့်မီးခိုးပမာဏများကြားရှိသိသိသာသာအနုတ်လက္ခဏာဆက်စပ်မှုကိုတွေ့ရှိရပါသည်။ (P <.001, မျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်မှုများအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်း) အပြင်လက်ဝဲ Putamen ရှိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုန့်ပြန်မှုတုံ့ပြန်မှုပါရာဒိုင်းအတွင်းရှိလုပ်ဆောင်မှုဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုများနှင့် (။ : P <.001) ။ လက်ဝဲ dorsolateral prefrontal cortex နှင့်လက်ျာ caudate ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ဆက်သွယ်မှုဟာနာရီပေါင်းများစွာညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ်။
ဘယ်ဘက် dorsolateral prefrontal cortex ခွင့် caudate ၏ကောက်ချက်နှင့်သက်ဆိုင်ရာ cue reactivity ကိုစဉ်အတွင်းညာဘက် striatum (caudate) အသံအတိုးအကျယ်, left striatum (putamen) activation နှင့်အတူ Self-အစီရင်ခံညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏အနုတ်လက္ခဏာအသင်းအဖွဲ့နှင့်အောက်ပိုင်း functional ဖြစ်စေဆက်သွယ်မှုအာရုံကြောအတွက်ပြောင်းလဲမှုကိုထင်ဟပ်နိုင် အတူတူ prefrontal cortical ဒေသများ၏တစ်ဦးအနိမ့်ထိပ်တန်း-Down မော်ဂျူအတူဆုလာဘ်စနစ်၏တစ်ဦးပြင်းထန်သောဆွ၏အကျိုးဆက်အဖြစ် plasticity ။ တနည်းအားဖြင့်ဒါဟာညစ်ညမ်းစားသုံးမှုကိုပိုအကြိုးစေသည်တစ်ခုမရှိမဖြစ်လိုအပ်ချက်ဖြစ်နိုင်ဘူး။
လမ်းဘတ်မိုင်, Negash S က, Stillman TF, Olmstead SB နှင့် Fincham FD မတည်မြဲသောချစ်ခြင်းမေတ္တာ - ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသုံးစွဲမှုနှင့်လူတစ် ဦး ၏အချစ်ဇာတ်လမ်းအပေါ်ကတိသစ္စာအားလျော့နည်းစေခြင်း in လူမှုရေးနှင့်လက်တွေ့စိတ်ပညာ၏ဂျာနယ်: vol ။ 31, အမှတ် 4, စစ။ 410-438, 2012 ။ Doi: 10.1521 / jscp.2012.31.4.410 ။ (ကျန်းမာရေး)
ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုမြင့်မားအဆင့်ဆင့်ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအတွက်အားနည်းကတိကဝတ်ကိုက်ညီတဲ့မယ်လို့မျှော်လင့်အတူညစ်ညမ်း၏စားသုံးမှုရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးအပေါ်သက်ရောက်မှုရှိမရှိဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှု 1 (ဎ = 367) မြင့်မားတဲ့ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအောက်ပိုင်းကတိကဝတ်နှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိနှင့်လေ့လာ2(ဎ = 34) စူးစမ်း data တွေကိုသုံးပြီးဒီတွေ့ရှိချက်ပုံတူကူးယူ။ လေ့လာမှု3(ဎ = 20) သင်တန်းသားများကိုကျပန်းဖို့တာဝန်တစ်ခုခုညစ်ညမ်းကြည့်ရှုရာမှတစ်ခုသို့မဟုတ် Self-ထိန်းချုပ်မှုအလုပ်တခုကိုမှရှောင်ကြဉ်ခံခဲ့ရသည်။ ညစ်ညမ်းသုံးပြီးဆက်လက်သူများသည်ထိန်းချုပ်မှုသင်တန်းသားများကိုထက်ကတိကဝတ်၏အောက်ပိုင်းအဆင့်ဆင့်သတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ လေ့လာမှု4(ဎ = 67) ခုနှစ်, ညစ်ညမ်း၏အဆင့်မြင့်စားသုံးသင်တန်းသားများကိုအွန်လိုင်းမှချက်တင်စဉ်အတွင်းတစ် extradyadic မိတ်ဖက်တွေနဲ့ပိုပြီးပါသေးတယ်။ လေ့လာမှု5(ဎ = 240) ထိုညစ်ညမ်းစားသုံးမှုဖောက်ပြန်ဖို့အပြုသဘောဆက်စပ်ခဲ့တာနဲ့ဒီအသင်းအဖွဲ့ကတိကဝတ်ကကမကထပြုခဲ့ခဲ့သည်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ယေဘုယျအားရလဒ်များကိုတစ်တသမတ်တည်းပုံစံ (လေ့လာမှု 1) Cross-Section (လေ့လာမှု 2) အပါအဝင်ချဉ်းကပ်မှုအမျိုးမျိုးသုံးပြီး, (လေ့လာမှု 3) စူးစမ်း, စမ်းသပ်တွေ့ရှိခဲ့ပါသည်နှင့်အမူအကျင့် (လေ့လာရေး4နှင့် 5) ဒေတာ။
Levin ME, Lillis J ကိုနှင့် Hayes SC ဘယ်အချိန်မှာအွန်လိုင်းညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကောလိပ်အထီးများထဲတွင်ပြဿနာကိုကြည့်ရှုခြင်းသလဲ? အတွေ့အကြုံကိုရှောင်ရှား၏စီမံခန့်ခွဲမှုအခန်းကဏ္ဍဆန်းစစ်ပါ in လိင်စွဲခြင်းနှင့်ထိုးစစ်ဆင်ခြင်း - ကုသခြင်းနှင့်ကာကွယ်ခြင်းဆိုင်ရာဂျာနယ်။ Volume ကို 19, Issue 3, 2012, စာမျက်နှာ 168-180, Doi: 10.1080 / 10720162.2012.657150 ။ (ကျန်းမာရေး)
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းကြည့်ကောလိပ်-အသက်အထီးအကြားဘုံဖြစ်ပါသည်, သို့သော်ထိုကဲ့သို့သောမြင်ကွင်းပြဿနာဖြစ်ပါတယ်ဘယ်သူကိုရှိမရှိနှင့်အဘို့ရှင်းလင်းသည်။ ကြည့်ရှုပြဿနာရှိမရှိများအတွက်အကောင့်စေခြင်းငှါတစျခုမှာအလားအလာရှိသောလုပ်ငန်းစဉ်သည်အတွေ့အကြုံရှောင်ရှားခြင်းဖြစ်ပါသည်: လုပ်နေလျှင်ပင်ပုံစံ, အကြိမ်ရေ, ဒါမှမဟုတ်ပုဂ္ဂလိကအတွေ့အကြုံတွေကို၏အခွအေနေ sensitivity ကိုလျှော့ချဖို့ရှာကြံဒါအပြုအမူထိခိုက်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ လက်ရှိလေ့လာမှု non-လက်တွေ့နမူနာအတူကောက်ယူ cross-section အွန်လိုင်းစစ်တမ်းမှတဆင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပြဿနာများ (စိတ်ကျရောဂါ, စိုးရိမ်စိတ်, စိတ်ဖိစီးမှု, လူမှုရေးလုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ကြည့်ရှုရန်နှင့်ဆက်စပ်သောပြဿနာများကို) ၏အကွာအဝေးအင်တာနက်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုခြင်းနှင့်အတွေ့အကြုံရှောင်ရှားခြင်း၏ဆက်နွယ်မှုကိုလေ့လာ 157 ဘွဲ့ကြိုကောလိပ်ယောက်ျား။ ရလဒ်များပိုပြီးကြည့် သာ. ကြီးမြတ်ပြဿနာများနှင့်ဆက်စပ်သောခဲ့သည်ထိုကဲ့သို့သောအကြောင်း, ကြည့်ရှု၏ကြိမ်နှုန်းတစ်ခုချင်းစီကိုစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ variable ကိုမှသိသိသာသာဆက်စပ်ခဲ့ကြောင်းညွှန်ပြ။ ထို့အပြင်အတွေ့အကြုံရှောင်ရှားကြည့်ရှုနှစ်ယောက်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ variable တွေကိုအကြားဆက်ဆံရေးတည်းဖြတ်, ထိုကဲ့သို့သောကြောင်းကြည့်ရှုအတွေ့အကြုံရှောင်ရှားခြင်း၏လက်တွေ့အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူရှိသူများတက်ရောက်လာသူများအကြားသာကြည့်ရှုဖို့ related စိုးရိမ်စိတ်များနှင့်ပြဿနာများကိုခန့်မှန်းခဲ့ပါတယ်။ ဤရလဒ်သည်ဤဖြစ်စဉ်ကိုပစ်မှတ်ထားကြောင်းအတွေ့အကြုံရှောင်ရှားခြင်းနှင့်ကုသမှုချဉ်းကပ်မှုအပေါ်သုတေသနပြု၏ဆက်စပ်ထဲမှာဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
T က, Laier ကို C, အမှတ်တံဆိပ် M က, Hatch က L နဲ့ Hajela R ကို Love အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစွဲ၏ neuroscience: တစ်ဦးကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့် Update ကို in အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသိပ္ပံ 2015,5(3), 388-433; Doi: 10.3390 / bs5030388 ။ (ကျန်းမာရေး)
အတော်များများကအလားအလာလူ့ဦးနှောက်ထဲမှာဆုလာဘ် circuitry ထိခိုက်အများအပြားအပြုအမူတွေကအနည်းဆုံးအချို့သောတစ်ဦးချင်းစီအတွက်ထိန်းချုပ်မှုများနှင့်စွဲလမ်း၏အခြားရောဂါလက္ခဏာတွေတစ်ဦးဆုံးရှုံးခြင်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြကြောင်းအသိအမှတ်ပြုပါသည်။ အင်တာနက်စွဲနှင့်စပ်လျဉ်း neuroscientific သုတေသနနောက်ခံအာရုံကြောဖြစ်စဉ်များပစ္စည်းဥစ္စာစွဲဆင်တူသောယူဆချက်ထောက်ခံပါတယ်။ အမေရိကန်စိတ်ရောဂါအသင်း (ယား) ကသူတို့ Diagnostic နှင့်စာရင်းအင်းလက်စွဲစာအုပ်၏ 2013 တည်းဖြတ်မူအတွက်နောက်ထပ်လေ့လာမှု warranting အလားအလာစွဲလမ်းရောဂါအဖြစ်, အင်တာနက်ဂိမ်းကစားတစျခုထိုကဲ့သို့သောအင်တာနက်ကို related အပြုအမူအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။ အခြားအင်တာနက်နှင့်ဆက်စပ်သောအပြုအမူ, ဥပမာ, အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, ဖုံးအုပ်ခြင်းမခံခဲ့ရပါ။ ဤသုံးသပ်ချက်ကိုအတွင်းမှာပဲကျနော်တို့အယူအဆအဆိုပြုထားနောက်ခံစွဲနေတဲ့အချုပ်ပေးနှင့်အင်တာနက်စွဲလမ်းနှင့်အင်တာနက်ဂိမ်းကစားရောဂါအပေါ် neuroscientific လေ့လာမှုများအကြောင်းကိုခြုံငုံသုံးသပ်ပေးပါ။ ထို့အပြင်ကျနော်တို့ကအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစွဲအပေါ်ရရှိနိုင် neuroscientific စာပေပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်စွဲမော်ဒယ်မှရလဒ်ချိတ်ဆက်ပါ။ အဆိုပါသုံးသပ်ချက်ကိုအင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစွဲဟာစွဲလမ်းမူဘောင်များနှင့်ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲနှင့်အတူရှယ်ယာအလားတူအခြေခံယန္တရားသို့ကိုက်ညီသောနိဂုံးချုပ်စေပါတယ်။ အတူတူအင်တာနက်စွဲအပေါ်လေ့လာမှုများနှင့်အင်တာနက်ဂိမ်း Disorder အားဖြင့်ငါတို့သည်အမူအကျင့်စွဲအဖြစ်စွဲလမ်းအင်တာနက်ကိုအပြုအမူတွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားဘို့ခိုင်ခံ့သက်သေအထောက်အထားများကိုကြည့်ပါ။ အနာဂတ်သုတေသနပစ္စည်းဥစ္စာများနှင့်အမူအကျင့်စွဲအကြားတိကျသောကွဲပြားခြားနားချက်ရှိပါသည်ဖြစ်စေမဖြေရှင်းရန်လိုအပ်ပါသည်။
တောက်ပအက်စ်အက်စ်, နယ်လ်ဆင် LJ, Poulsen fo, Willoughby BJ အရွယ်ရောက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများကိုထွန်းသစ်စနှင့်အပြုအမူယရှက်ကြောက်စိတ်အရေးပါ? in ထွန်းသစ်စလူကြီး။ 2013 စက်တင်ဘာ 1; 1 (3): 185-95 ။ (ပင်မ)
မြောက်မြားစွာလေ့လာမှုများရှက်ကြောက်စိတ်ငယ်စဉ်ကလေးဘဝနှင့်မြီးကောင်ပေါက်အရွယ်အတွက်တစ်ဦးချင်းစီအပေါ်သက်ရောက်မှုကိုဘယ်လိုပြကြပြီ သို့သော်နည်းနည်းရှက်ကြောက်စိတ်ထွန်းသစ်စလူကြီးအတွက်ရှိစေခြင်းငှါသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ ဒီလေ့လာမှုကရှက်ကြောက်စိတ်ထွန်းသစ်စအရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသားနှင့်အမျိုးသမီး၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်စေခြင်းငှါဘယ်လိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း။ သင်တန်းသားများကိုအကြီးအကျယ်အမျိုးသမီးနေသောအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတလွှားလေးကောလိပ်ဆိုက်များမှ 717 ကျောင်းသားများ, (69%), ဥရောပအမေရိကန် (69%), လက်မထပ်ရသေး (100%), နှင့်၎င်းတို့၏မိဘများ '' အိမ်မှာ (90%) ပြင်ပမှာနေထိုင်နေပါဝင်သည်။ ရလဒ်များရှက်ကြောက်စိတ်အဆိုးမိန်းမတို့အဘို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်သော်လည်းရှက်ကြောက်စိတ်အပြုသဘောယောက်ျားများအတွက်လိင်ကိစ္စသဘောထားများ (ကပိုလစ်ဘရယ်အမြင်များထင်ဟပ်) နဲ့ဆက်နွယ်ခဲ့အကြံပြုသည်။ ရှက်ကြောက်စိတ်အပြုသဘောယောက်ျားတို့အတွက်တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုတိုက်ပိတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ရှက်ကြောက်စိတ်လည်းအဆိုး relational လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ (coital နှင့် noncoital) အပြုအမူတွေနှင့်အမျိုးသမီးများအတွက်တစ်သက်တာလက်တွဲဖော်အရေအတွက်နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ဤအတွေ့ရှိချက်အဘို့အသက်ရောက်မှုတွေဆွေးနွေးတင်ပြထားပါတယ်။
Maddox လေး, Rhoades GK, Markman HJ တစ်ယောက်တည်းသို့မဟုတ်အတူတကွလိင်-အကဲဆတ်သောပစ္စည်းများကြည့်ရှုခြင်း: ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးနှင့်အတူအသင်း in Arch လိင်ပြုမူနေ။ 2011 Apr; 40(2):441–8.
Negash S က, Sheppard NV, လမ်းဘတ်မိုင်နှင့် Fincham FD ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံစားသုံးမှုနှင့်နှောင့်နှေးလျှော့: လက်ရှိပျော်ရွှင်မှုအဘို့အနောက်ပိုင်းတွင်ဆုလာဘ်များအရောင်းအဝယ်ဖြစ် in လိင်သုတေသနဂျာနယ်, 2015 သြဂုတ် 25: 1-12 ။ [EPub ရှေ့ဆက်ပုံနှိပ်၏] ။ (ကျန်းမာရေး)
အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်ဒေါ်လာဘီလီယံပေါင်းများစွာတန်သောစက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်ပြီး၎င်းအားလက်လှမ်းမီလာစေရန်တိုးပွားစေခဲ့သည်။ နှောင့်နှေးခြင်းလျှော့စျေးပိုမိုသေးငယ်ပြီးပိုချက်ချင်းဆု၏မျက်နှာသာအတွက်ပိုကြီးတဲ့နောက်ပိုင်းတွင်ဆုချီးမြှင့်တန်ဖိုးများပါဝင်သည်။ အထူးသဖြင့်ပြင်းထန်သောသဘာဝဆုလာဘ်များအနေဖြင့်လိင်လှုံ့ဆော်မှု၏စဉ်ဆက်မပြတ်အသစ်အဆန်းနှင့်အဓိကအားဖြင့်အင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည် ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်စနစ်၏ထူးခြားသောလှုပ်ရှားမှုကိုဖြစ်စေသည်။ ဆင့်ကဲဖြစ်စဉ်ဆိုင်ရာစိတ်ပညာနှင့်အာရုံကြောဆိုင်ရာစီးပွားရေးဆိုင်ရာသီအိုရီဆိုင်ရာလေ့လာမှုများအရအင်တာနက်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကိုစားသုံးခြင်းသည်နှောင့်နှေးခြင်းလျှော့ချခြင်းနှုန်းနှင့်ပိုမိုဆက်စပ်မည်ဟုယူဆချက်ကိုလေ့လာမှုနှစ်ခုကစစ်ဆေးခဲ့သည်။ လေ့လာမှု 1 က longitudinal design ကိုအသုံးပြုတယ်။ သင်တန်းသားများသည်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများနှင့်မေးခွန်း ၁ ကိုအချိန် ၁ ရက်တွင်လျှော့ချပြီးနောက်လေးပတ်အကြာတွင်ပြီးစီးခဲ့သည်။ ပိုမိုမြင့်မားသောကန ဦး ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုကိုတင်ပြသောသင်တန်းသားများသည် Time 1 တွင်ပိုမိုနှေးကွေးသောလျှော့စျေးနှုန်းကိုပြသပြီးကန ဦး နှောင့်နှေးခြင်းလျှော့ချခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည်။ လေ့လာမှု2ကိုစမ်းသပ်ဒီဇိုင်းနှင့်အတူကြောင်းကျိုးအဘို့အစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ သင်တန်းသားများကိုမိမိတို့၏အကြိုက်ဆုံးအစားအစာသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းစာပေရုပ်ပုံများကို ၃ ပတ်ကြာရှောင်ကြဉ်ရန်ကျပန်းတာဝန်ပေးခဲ့သည်။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေကြည့်ရှုခြင်းမှရှောင်ကြဉ်သောသင်တန်းသားများသည်မိမိတို့ကြိုက်နှစ်သက်သောအစာကိုရှောင်ကြဉ်သောသင်တန်းသားများထက်လျော့နည်းခြင်းနောက်ကျခြင်းကိုလျှော့စျေးပြသခဲ့သည်။ တွေ့ရှိချက်အရအင်တာနက်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေသည်လိင်ဆိုင်ရာဆုလာဘ်ဖြစ်ပြီးအခြားသဘာဝဆုကျေးဇူးများနှင့်ကွဲပြားခြားနားစွာလျှော့စျေးလျှော့ချခြင်းကိုအထောက်အကူပြုသည်။ ဤလေ့လာမှုများ၏သီအိုရီနှင့်လက်တွေ့သက်ရောက်မှုမီးမောင်းထိုးပြနေကြသည်။
ဤအကြောင်းအရာသည်တစ်ဦး paywall နောက်ကွယ်မှဖြစ်နိုင်သည် ဒီမှာ။ မြင် ငါဘယ်လိုသုတေသနမှဝင်ရောက်ခွင့်ရပါသလဲ? လက်လှမ်းအကြောင်းကိုအကြံပြုချက်များသည်။
Ng သည် JYS, Wong က ML, ချမ်း RKW, Sen P ကို, Chio MTW နှင့် Koh သည်: D လိင်ကွဲပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းများထဲတွင်စအိုလိင်ဆက်ဆံနဲ့ဆက်စပ်နေတဲ့အချက်များအတွက်ကျားကွာခြားချက်များ in AIDS ရောဂါပညာရေးနှင့်ကာကွယ်တားဆီးရေးအတွက်စင်္ကာပူ, 2015, Vol ။ 27, အမှတ် 4, စစ။ 373-385 ။ Doi: 10.1521 / aeap.2015.27.4.373 ။ (ကျန်းမာရေး)
cross-section စစ်တမ်းကိုသုံးပြီးကျနော်တို့ကျား၏ပျံ့နှံ့မှုအတွက်ကွဲပြားမှုနှင့်စင်္ကာပူအတွက်သာအများပြည်သူကာလသားဆေးခန်းတက်ရောက်ခြင်းမြီးကောင်ပေါက်အကြားစအိုလိင်ဆက်ဆံနှင့်ဆက်စပ်သည့်အချက်များဆန်းစစ်ခဲ့သည်။ ဒေတာကို 1035 မှ 14 အသက် 19 ကနေလိင်တက်ကြွဆယ်ကျော်သက်စုဆောင်း Poisson ဆုတ်ယုတ်သုံးပြီးဆန်းစစ်ခဲ့ကြသည်။ စအိုလိင်ဆက်ဆံ၏ပျံ့နှံ့မှုအစဉ်အဆက်အထဲတွင်စေ့စပ်သိသိသာသာပိုပြီးအမျိုးသမီး (28%) အမျိုးသားများထက် (32%) နှင့်အတူ, 23% ဖြစ်ခဲ့သည်။ multivariate ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာတွင်, နှစ်ဦးစလုံးလိင်အဘို့စအိုလိင်ဆက်ဆံနှင့်ဆက်စပ်အချက်များပါးစပ်လိင်နှင့်နောက်ဆုံးလိင်မှာဓတေား၏ nonuse ခဲ့ကြသည်။ အထီးအဘို့, စအိုလိင်ဆက်ဆံလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပွဲဦးထွက်၏ငယ်ရွယ်သောအသက်အရွယ်နှင့်ပိုမိုရိပ်မိပြင်ပထိန်းချုပ်မှုနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အမျိုးသမီးများထဲတွင်ကြောင့်လိင်အတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့ရွယ်တူချင်းဖိအားကိုတှနျးလှနျမွငျ့မားပုန်ကန်သောရမှတ်များနှင့်ယုံကြည်မှုမရှိခြင်းနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ စအိုလိင်ဆက်ဆံဘို့တသမတ်တည်းကွန်ဒုံးအသုံးပြုမှုအသီးသီး 22 ယောက်ျားနှင့်မိန်းမနှစ်ယောက်တည်းဘို့% နှင့် 8% ဖြစ်ခဲ့သည်။ မြီးကောင်ပေါက်အဘို့အကာလသားကြိုတင်ကာကွယ်ရေးအစီအစဉ်များ, စအိုလိင်ဆက်ဆံဖြေရှင်းရန်ကျား-သတ်သတ်မှတ်မှတ်ဖြစ်နှင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားတစ်ဦးချင်းစီကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးဝိသေသလက္ခဏာများသို့ယူသင့်ပါတယ်။
အပြည့်အဝဆောင်းပါးတစ် paywall နောက်ကွယ်မှဖြစ်ပါသည် ဒီမှာ။ မြင် ငါဘယ်လိုသုတေသနမှဝင်ရောက်ခွင့်ရပါသလဲ? ? လက်လှမ်းမီမှုအတွက်အကြံဥာဏ်များအတွက်။
ပီတာ ST, Bowen တို့ MT, Bohrer K ကိုလို့ McGregor IS နှင့်နျူမန် ID ကို oxytocin နျူကလီးယပ် accumbens အတွက်အီသနောစားသုံးမှုနှင့်အီသနော-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ် in စွဲဇီဝဗေဒ။ အပိုဒ်ပထမဦးဆုံးအွန်လိုင်းထုတ်ဝေ: 25 ဇန်နဝါရီလ 2016, Doi: 10.1111 / adb.12362 ။ (ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး)
အရက် (EtOH) ကိုအများဆုံးကျယ်ပြန့်နှိပ်စက်အပန်းဖြေမူးယစ်ဆေးဝါးများတစ်ခုဖြစ်သည်နှင့်အငြင်းခုံဖွယ်အရှိဆုံးအန္တရာယ်ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော်အရက်သုံးမမှန်များအတွက်လက်ရှိကုသမှုရွေးချယ်စရာယေဘုယျအားဖြင့်ထိရောက်မှုနှင့်ရပ်ရွာထဲတွင်ဆင်းရဲသားကိုစုပ်ယူသုံးစွဲမှုကန့်သတ်ခဲ့ကြသည်။ ဤအခြေအနေတွင်ခုနှစ်, neuropeptide oxytocin (OXT) ရက်အပါအဝင်ပစ္စည်းဥစ္စာ-အသုံးပြုမှုမမှန်တစ်အရေအတွက်, များအတွက်အလားအလာအလားအလာကုသမှု option ကိုအဖြစ်ပေါ်ထွက်လာခဲ့သည်။ ၏စားသုံးမှုလျှော့ချခြင်းနှင့်တ္ထုများတစ်ခုကျယ်ပြန့်အဘို့အစွဲလမ်းအတွက် OXT ၏ utility ကိုပု mesolimbic dopamine လမ်းကြောင်းအတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါး-သွေးဆောင် neurochemical သက်ရောက်မှု modulate ရန်၎င်း၏စွမ်းရည်၌အိပျနိုငျသညျ။ သို့သော်ဤလမ်းကြောင်းအတွက် EtOH လုပ်ရပ်များအပေါ် OXT ၏သက်ရောက်မှုသေးစူးစမ်းခံရဖို့ရှိပါတယ်။ ဤတွင်ကျနော်တို့အထီး Wistar ကြွက်များတွင် (1 အရက်သောက်အစည်းအဝေးများ) တစ်ခုစူးရှ intracerebroventricular OXT ၏ (icv) ပြုတ်ရည် (5 μg / 20 μl) 59 နေ့ရက်ကာလအဘို့ EtOH မှနာတာရှည်ပြတ်တောင်းပြတ်တောင်းလက်လှမ်းပြီးနောက်မိမိဆန္ဒအလျောက် EtOH (28 ရာခိုင်နှုန်း) Self-အုပ်ချုပ်ရေး attenuated ကြောင်းထုတ်ဖေါ်။ (v / w 1.5 g / ကီလိုဂရမ်, 15 ရာခိုင်နှုန်း) EtOH ၏ 10 နေ့စဉ် ip ထိုးလက်ခံရရှိခဲ့ကြောင်း EtOH-နုံကြွက်များနှင့်ကြွက်များနှစ်ဦးစလုံးအတွက်နျူကလိယ accumbens အတွင်း dopamine လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့် Next ကိုကျနော်တို့ EtOH တစ်ခုစူးရှ intraperitoneal (ip) ဆေးထိုးကြောင်းသရုပ်ပြ ။ Icv OXT လုံးဝ EtOH-နုံနဲ့နာတာရှည်ကုသကြွက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက် EtOH-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်ပိတ်ဆို့။ OXT အားဖြင့် EtOH-သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ရာကို attenuation တွေလျှော့ EtOH Self-အုပ်ချုပ်ရေး icv OXT ပြုတ်ရည်ကိုအောက်ပါလေ့လာတွေ့ရှိရှင်းပြဖို့ကူညီလိမ့်မည်။
အပြည့်အဝစက္ကူကိုကြည့်ပါ ဒီမှာ။ ဤအကြောင်းအရာသည်တစ်ဦး paywall နောက်ကွယ်မှဖြစ်နိုင်သည်။ မြင် ငါဘယ်လိုသုတေသနမှဝင်ရောက်ခွင့်ရပါသလဲ? လက်လှမ်းအကြောင်းကိုအကြံပြုချက်များသည်။
Pizzol, D. , Bertoldo, အေ, & Foresta, C. မြီးကောင်ပေါက်နဲ့ web porn: လိင်၏ခေတ်သစ်တစ်ခု in ဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ဆေးပညာနှင့်ကျန်းမာရေးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဂျာနယ် သြဂုတ်72015 ။ pii: /j/ijamh.ahead-of-print/ijamh-2015-0003/ijamh-2015-0003.xml ။ Doi: 10.1515 / ijamh-2015-0003 ။ (ကျန်းမာရေး)
နောက်ခံ: ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအထူးသဖြင့်သူတို့ရဲ့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလေ့အကျင့်များနှင့်ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌, မြီးကောင်ပေါက်များ၏လူနေမှုထိခိုက်စေနိုင်ပြီး, မိမိတို့၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာသဘောထားများနှင့်အပြုအမူအပေါ်သိသိသာသာသြဇာလွှမ်းမိုးမှုရှိနိုင်ပါသည်။
Objective: ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာကြိမ်နှုန်း, ကြာချိန်နှင့်အထက်တန်းကျောင်းတက်ရောက်ခြင်းငယ်ရွယ်အီတလီအားဖြင့်ကို web porn အသုံးချ၏အမြင်နားလည်သဘောပေါက်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ဖြစ်တယ်။
ပစ္စည်းများနှင့်နည်းလမ်းများ - အထက်တန်းကျောင်း၏နောက်ဆုံးနှစ်တက်ရောက်သူစုစုပေါင်း ၁၅၆၅ ယောက်သည်လေ့လာမှုတွင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး ၁,၄၉၂ ဦး သည်အမည်မသိစစ်တမ်းတစ်ခုကိုဖြည့်ရန်သဘောတူခဲ့သည်။ ဒီလေ့လာမှုရဲ့အကြောင်းအရာကိုကိုယ်စားပြုတဲ့မေးခွန်းတွေက - ၁) သင်ဘယ်နှစ်ကြိမ် ၀ က်ဘ်ကိုသုံးပါသလဲ။ ၂။ သင်ဆက်သွယ်မှုမည်မျှကြာမည်နည်း။ ၃) သင်ညစ်ညမ်းသောဆိုဒ်များနှင့်ဆက်သွယ်ပါသလား။ ၄။ ညစ်ညမ်းသောဝက်ဘ်ဆိုက်များကိုသင်အကြိမ်မည်မျှရယူသနည်း။ ၅။ သူတို့ကိုသင်အချိန်ဘယ်လောက်ပေးသလဲ။ ၆ ။ ၇။ ဤဆိုဒ်များတက်ရောက်ခြင်းကိုသင်ဘယ်လိုသတ်မှတ်သလဲ။ စာရင်းအင်းခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ Fischer ရဲ့စမ်းသပ်မှုအားဖြင့်ဖျော်ဖြေခဲ့သည်။
ရလဒ်: အားလုံးလူငယ်များတစ်ခုနီးပါးနေ့စဉ်အခြေခံပေါ်မှာ, အင်တာနက် access ကိုရှိသည်။ စစ်တမ်းကောက်ယူသူတွေထဲမှာ, အင်တာနက်အသုံးပြုသူ 1,163 (77.9%) ညစ်ညမ်းပစ္စည်း၏စားသုံးမှုမှဝန်ခံ, ဤများ၏နေ့စဉ် 93 (8%) access ကိုညစ်ညမ်းဝက်ဘ်ဆိုက်များ, ဤဆိုဒ်များအားဝင်ရောက် 686 (59%) ယောက်ျားလေးများအမြဲအဖြစ်ညစ်ညမ်း၏စားသုံးမှုရိပ်မိ လှုံ့ဆော်ဖို့, 255 (21.9%) ကအလားအလာအစစ်အမှန်ဘဝမိတ်ဖက်ဆီသို့ဦးတည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ဝင်စားမှုလျော့နည်းစေနှင့်ကျန်ရှိနေသေးသော 116 (10%) စွဲလမ်းတစ်မျိုးကိုသတင်းပို့ကြောင်းအဖြစ်လေ့, 106 (9.1%) အစီရင်ခံစာသတ်မှတ်။ ရာခိုင်နှုန်းပုံမှန်စားသုံးသူအကြား 19% အထိမြင့်တက်နေချိန်မှာအပြင်, ခြုံငုံညစ်ညမ်းစားသုံးသူများ 25.1%, တစ်မူမမှန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတုံ့ပြန်မှုသတင်းပို့ပါ။
နိဂုံးချုပ်: ဒါဟာအင်တာနက်လုံခြုံနှင့်တာဝန်ရှိအသုံးပြုမှုနှင့်သူ့ရဲ့အကြောင်းအရာတွေကို၏ဝဘ်အသုံးပြုသူများသည်, အထူးသဖြင့်ငယ်ရွယ်သုံးစွဲသူများပညာပေးရန်လိုအပ်ပါသည်။ ထိုမှတပါး, လူထုပညာရေးလှုပ်ရှားမှုများမြီးကောင်ပေါက်အားဖြင့်၎င်း, မိဘနှစ်ဦးစလုံးသည်အင်တာနက်-related လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စများ၏အသိပညာတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ကူညီပေးဖို့နံပါတ်နှင့်ကြိမ်နှုန်းတိုးမြှင်ရပါမည်။
အပြည့်အဝဆောင်းပါးတစ် paywall နောက်ကွယ်မှဖြစ်ပါသည် ဒီမှာ။ မြင် ငါဘယ်လိုသုတေသနမှဝင်ရောက်ခွင့်ရပါသလဲ? လက်လှမ်းအပေါ်အကြံဉာဏ်။
စာပို့သမား N နှင့်စာပို့သမားတစ်ဦးက (နိဒါန်း) မရဏမိမိတို့ကိုယျကို Amusing: Show ကိုစီးပွားရေး၏ခေတ်ထဲမှာအများပိုင်သုတျ Paperback, 20th နှစ်မြောက် Edition ကို, 208 စာမျက်နှာများ Penguins စာအုပ်များအားဖြင့် 2005 (ပထမ 1985 ထုတ်ဝေခဲ့သည်) ။ ISBN 014303653X (ISBN13: 9780143036531) (ပိန်)
မူလက 1985 ထုတ်ဝေကျွန်တော်တို့ရဲ့နိုင်ငံရေးနှင့်လူထုဟောပြောချက်အပေါ်ရုပ်မြင်သံကြား၏တဖြည်းဖြည်းစားနိုင်ပြီးသက်ရောက်မှုနှင့် ပတ်သက်. နီးလ်စာပို့သမားရဲ့မြေပြင်ကိုချိုးဖောက် polemic နှစ်ဆယ်ရာစုအတွက်ထုတ်ဝေနေတဲ့နှစ်ဆယ်-ပထမရာစုစာအုပ်အဖြစ်ချီးကျူးခဲ့သည်။ အခုတော့ရုပ်မြင်သံကြားနှင့်အတူပိုမိုခေတ်မီအီလက်ထရောနစ်မီဒီယာ-ကနေအင်တာနက်ကိုဒီဗီဒီ-က ပို. အဓိပ်ပာယျအပေါ်ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါသည်မှဖုန်းများဆဲလ်များကဝင်ရောက်ခဲ့သည်။ မရဏမိမိတို့ကိုယျကို Amusing နိုင်ငံရေး, သတင်းစာပညာ, ပညာရေးနှင့်ပင်ဘာသာတရားကိုဖျော်ဖြေရေးများ၏တောင်းဆိုချက်များမှဘာသာရပ်ဖြစ်လာသည့်အခါမည်သို့ဖြစ်ပျက်မှာပရောဖက်ပြုကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အမြင့်ဆုံးရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုအစေခံနိုင်အောင်ကလည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့မီဒီယာများ၏ထိန်းချုပ်မှုပြန်များအတွက်အသေးစိတ်အစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
Pratt R. နှင့်ဖာနန်ဒက်စကို C ဘယ်လိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံကားအဘယ်သူလိင်ထိခိုက်နစ်နာမှုကလေးများနှင့်ပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း၏အန္တရာယ်အကဲဖြတ် Distort နိုင်ပါစေ in ကလေးများသြစတြေးလျ, အတှဲ 40 Issue 03 စက်တင်ဘာလ 2015, စစ 232-241 ။ Doi: 10.1017 / cha.2015.28 ။ (ကျန်းမာရေး)
လွန်ခဲ့သည့်ဆယ်စုနှစ်သုံးခုအတွင်းတွင်ဆယ်ကျော်သက်များ၏လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမတော်မတရားပြုမူသောအပြုအမူများကိုစစ်ဆေးခြင်းနှင့်ကုသခြင်းကိုလက်ခံခြင်းသည်“ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူများပိုမိုလေးနက်မှုရှိခြင်း” သည်ဆယ်ကျော်သက်များ၏အပြုအမူများကိုပိုမိုစွဲမြဲစေပြီးအသေးစားစော်ကားမှုများမှတစ်ဆင့် ပိုမိုလေးနက်သော, ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာသောလုပ်ရပ်များ။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအနိုင်ကျင့်ခြင်းအပြုအမူတွင်ပါ ၀ င်သည့်လူငယ်များသည်၎င်းတို့ဖြစ်ပေါ်နေသောထိခိုက်နစ်နာမှုများကိုနှစ် ဦး စလုံးစိတ်ပျက်လက်ပျက်ဖြစ်သွားနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယူဆပါသည်။ ဒီ conceptualisation လိင်အလွဲသုံးစားမှုအပြုအမူ၏ကြာချိန်အကြားအတန်ငယ်ကြောင်းကျိုးဆက်စပ်ကြားဆက်ဆံရေးအကြံပြု; ပြbehaviorနာကိုကိုင်တွယ်ရန်နှင့်ကုသရန်လိုအပ်သည့်အပြုအမူပြင်းထန်မှုနှင့်ကုသမှုကြာချိန်။
ညစ်ညမ်းစားသုံးမှုအလားအလာအန္တရာယ် sexually သူကိုလူငယ်၏အကဲဖြတ်နှင့်ကုသမှုထိခိုက်ခဲ့သလဲ ပြင်းထန်မှုနှင့်ကျူးလွန်ခဲ့တဲ့လိင်ချေမှုန်းရေးလုပ်ရပ်များများ၏ကုပ်တွယ်အကြားဆက်ဆံရေးတည်ရှိပါသလား, ဒါမှမဟုတ်ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုနှင့်ဤဆက်ဆံရေးဟာပြောင်းလဲကြည့်ရှုအားပေးခဲ့သဘယ်အရာကို re-အကောင်အထည်အဖော်ခဲ့သလဲ ဤဆောင်းပါးသည်ဤ themes များနှင့်မေးခွန်းနံပါတ်စူးစမ်း။
အပြည့်အဝဆောင်းပါးတစ် paywall နောက်ကွယ်မှဖြစ်ပါသည် ဒီမှာ။ မြင် ငါဘယ်လိုသုတေသနမှဝင်ရောက်ခွင့်ရပါသလဲ? လက်လှမ်းအကြောင်းကိုအကြံပြုချက်များသည်။
ရိဒ် RC, Davtian M က, Lenartowicz တစ်ဦးက, Torrevillas RM, Fong သည် TW hypersexual ယောက်ျားအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ADHD ရဲ့အကဲဖြတ်နှင့်ကုသမှုအပေါ်အမြင်များ in Neuropsychiatry ။ 2013 ဇွန် 1;3(3): 295-308 ။ (ပင်မ)
ဤဆောင်းပါးသည်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ADHD နဲ့ hypersexual အပြုအမူအပေါ်သုတေသနပြု၏လက်ရှိခန္ဓာကိုယ်သုံးသပ်ပြီး။ စိတ်ပညာနှင့် neuroscience ၏တောအရပ်မှအမြင်များအပေါ်ဆွဲအများအပြားအကြံပြုချက်များ ADHD နှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီ hypersexual အပြုအမူအတွက်စေ့စပ်ညှိနှိုင်းရန်အတွက်အားနည်းချက်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာကြောင့်ရှင်းပြဖို့ကမ်းလှမ်းခဲ့ကြသည်။ အကဲဖြတ်လမ်းညွှန်ချက်များ Clinician အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ADHD ကနေ hypersexuality ၏ဝိသေသလက္ခဏာများခွဲခြားကူညီရန်ထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့အကြံပြုချက်များ hypersexual လူနာအတွက်အရွယ်ရောက်ပြီးသူ ADHD ၏ကုသမှုများအတွက်လုပ်နေကြသည်။
Shayer, အမ်, Ginsburg, ဃနှင့် Coe, R ကို, နှစ်ပေါင်းသုံးဆယ် - ကြီးမားသောဆန့်ကျင်ရေးအကျိုးသက်ရောက်မှု? Piagetian စမ်းသပ်မှု Volume & Heaviness စံချိန်သည် 1975-2003 ။ ပညာရေးဆိုင်ရာစိတ်ပညာ၏ဗြိတိသျှဂျာနယ်, 2007, 77: 25-41 ။ Doi: 10.1348 / 000709906X96987
နောက်ခံ Volume & Heaviness သည် ၁၉၇၅/၇၆ တွင် CSMS စစ်တမ်းတွင်အသုံးပြုသော Piagetian စမ်းသပ်မှုသုံးခုအနက်မှတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော် Flynn အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပြသော psychometric test များနှင့်မတူသည်မှာ - ကျောင်းသားများသည်ပုံမှန်အားဖြင့်ပုံမှန်အားဖြင့်တိုးတက်မှုများကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည်။ ၎င်းသည် Y1975 ကျောင်းသားများ၏စွမ်းဆောင်ရည်သည်မကြာသေးမီကပိုမိုဆိုးရွားလာနေသည်။
ရည်ရွယ်ချက်။ လုံလုံလောက်လောက်ကြီးမားခြင်းနှင့်ကိုယ်စားလှယ်ကျောင်းများ၏နမူနာစွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုဆိုးရွားလာ၏အယူအဆစုံစမ်းစေနိုင်အောင်ရွေးကောက်တော်မူခြင်း, quantitative ခန့်မှန်းခဲ့သည်။
နမူနာ။ Volume & Heaviness စာမေးပွဲနှင့် Durham တက္ကသိုလ် CEM Center MidYIS စာမေးပွဲနှင့်ပတ်သက်သည့်ကျောင်းသားအချက်အလက်များပါ ၀ င်သည့် Y7 စာသင်နှစ် (၆၇) ကျောင်းအုပ်စုများသည် ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှ ၂၀၀၃ ခုနှစ်အတွင်းကျောင်းသား ၁၀ ယောက်၊
နည်းလမ်း။ ကျောင်းသားများ၏ကျောင်းမှ Volume & Heaviness ကိုကျောင်းများအပေါ်ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းသည် MidYIS 1999 စံသတ်မှတ်ချက်ရမှတ်ကိုဆိုလိုသည်။ MidYS = 100 တွင်ဆုတ်ယုတ်ခြင်းကိုတွက်ချက်ခြင်းသည် ၁၉၇၆ ခုနှစ်နှင့်နှိုင်းယှဉ်နိုင်သည်။
ရလဒ်များ။ ၁၉၇၆ မှ ၂၀၀၃ ခုနှစ်အတွင်းရမှတ်များကျဆင်းခြင်းသည်ယောက်ျားလေးများ = ၁.၁၃ နှင့်မိန်းကလေးများ = ၀.၆ အဆင့်ဖြစ်သည်။ ၁၉၇၆ ခုနှစ်တွင်ယောက်ျားလေးများအား ၀.၀၅ သွေဖီမှုကွာခြားချက်ကို ၂ ဝဝ ၂ ခုနှစ်တွင်လုံးဝပျောက်ကွယ်သွားစေခဲ့သည်။ ၁၉၇၆ နှင့် ၂၀၀၃ အကြားယောက်ျားလေးများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကျဆင်းမှု၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအရွယ်အစားမှာ ၁.၀၄ စံသွေဖီမှုဖြစ်ပြီး၊ မိန်းကလေးများအတွက်မူ ၀.၅၅ စံသတ်မှတ်ချက်သွေဖီမှုဖြစ်သည်။
နိဂုံး။ သင်္ချာနှင့်သိပ္ပံများတွင် Key ကိုအဆင့်2SATS အတွက်စွမ်းဆောင်ရည်အပေါ်က Flynn ကအကျိုးသက်ရောက်မှု၏စည်းကမ်းချက်များ၌ကြည့်ရှုအားပေးနေသည်ဖြစ်စေ, သို့မဟုတ်အစိုးရစာရင်းဇယား၏စည်းကမ်းချက်များ၌ - - မူလတန်းကျောင်းထွက်ခွာကလေးများ ပို. ပို. အသိဉာဏ်ရတဲ့နှင့်အရည်အချင်းဖြစ်ကြောင်းအဆိုပါစိတ်ကူးအားဖြင့်ဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုထဲသို့သွင်းထားခြင်းဖြစ်သည် ဤအတွေ့ရှိချက်။
Singleton အိုHölzelကယ်, Vangel M က, Brach N ကို, Carmody J ကိုနှင့် Lazar SW ။ စိတ်-အခြေခံပြီးကြားဝင်ဖြန်ဖြေရေးအပြီးတွင် Brainstem gray matter အာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်ပြောင်းလဲမှုကိုစိတ်ဓာတ်ကောင်းပြီ-ခံများတွင်တိုးတက်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်းဖြစ်ပါတယ် in လူ့အာရုံကြောသိပ္ပံ၏ Frontiers, 2014 ဖေဖော်ဝါရီ 18; 8: 33 ။ Doi: 10.3389 / fnhum.2014.00033 ။ (ဖြတ် Porn)
တစ်ဦးချင်းစီပစ္စုပ္ပန်တခဏအတွင်းအတှေ့အကွုံ non-စျကွောစီရငျအသိအမြင်အဖြစ်သတ်မှတ်သောသတိသမ္ဘာဝနာ၏အလေ့အကျင့်များအပါအဝင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြားဝင်၏အသုံးချမှတစ်ဆင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကောင်းမွန်စွာဖြစ်ခြင်း (PWB) ၏သူတို့ရဲ့အဆင့်ဆင့်တိုးတက်စေနိုင်ပါတယ်။ သံလိုက်၏ voxel-based morphometry နှင့်အတူရှာဖွေတွေ့ရှိအဖြစ်ကျနော်တို့မကြာသေးမီက pons အပါအဝင် MRI Scan ဖတ်ပဲ့တင်သံလျင်မြန်စွာဝယ်ယူ gradient ကိုကိုပြင်ဆင်ထားတဲ့ 8-ရက်သတ္တပတ်-သတိ-based စိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချရေးအတော်ကြာဦးနှောက်ဧရိယာများတွင်မီးခိုးရောင်ကိစ္စအာရုံစူးစိုက်မှုအတွက်တိုးမြှင့်ပေးရန် (MBSR) သင်တန်းခဲ, ကြောင်းအစီရင်ခံ / အဆိုပါ brainstem ၏ / locus coeruleus ဧရိယာ raphe ။ ခံစားချက်နှင့် arousal အတွက် pons နှင့် raphe ၏အခန်းကဏ္ဍကိုပေးထားကျနော်တို့ကဒီဒေသအတွက်အပြောင်းအလဲများကိုသုခချမ်းသာပြောင်းလဲမှုများအခြေခံအံ့သောငှါတွေးဆ။ ယခင်ကထုတ်ဝေဒေတာအစုထဲကနေ 14 ကျန်းမာတစ်ဦးချင်းစီ၏တစ်ဦးကအပိုင်းတစ်ပိုင်းကိုသာလျှင်ခန္ဓာဗေဒ MRI ပြီးစီးခဲ့နှင့် MBSR ပါဝင်မှုမီနှင့်ပြီးနောက် PWB စကေးထွက်ပြည့်စေတော်မူ၏။ PWB ပြောင်းလဲမှုယခင်က Post-MBSR မှပြောင်းလဲအကျူးပြသခဲ့သောသောသူတို့ဦးနှောက်ဒေသများအတွင်းမီးခိုးရောင်ကိစ္စသိပ်သည်းဆပြောင်းလဲမှုများများအတွက်ကြိုတင်ခန့်မှန်းချက် regressor အဖြစ်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ရလဒ်များငါးခု PWB အပေါ်ရမှတ် subscales အဖြစ် PWB စုစုပေါင်းရမှတ် MBSR သင်တန်းကျော်သိသိသာသာတိုးပွားလာကြောင်းပြသခဲ့သည်။ အဆိုပါပြောင်းလဲမှုအပြုသဘော brainstem နှစ်ခုအချိုးကျနှစ်နိုင်ငံပြွတ်အတွက်မီးခိုးရောင်ကိစ္စအာရုံစူးစိုက်မှုတိုးဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ သူများသည်ပြွတ်အဆိုပါ pontine tegmentum, locus coeruleus, နျူကလိယ raphe pontis, နှင့်အာရုံခံ trigeminal နျူကလိယ၏ဧရိယာဆံ့တို့အားထင်ရှားလေ၏။ အဘယ်သူမျှမပြွတ်အဆိုး PWB အတွက်အပြောင်းအလဲဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့ကြသည်။ ဤသည်မှာပဏာမလေ့လာမှုတိုးမြှင် PWB တစ်ဦးအာရုံကြော Correlate အကြံပြုထားသည်။ အဆိုပါဖော်ထုတ်ဦးနှောက်ဧရိယာများပေါင်းစပ်ခြင်းနှင့် arousal နှင့်ခံစားချက်၏မော်ဂျူတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်သော neurotransmitters, norepinephrine နှင့် serotonin ၏လွှတ်ရာဆိုဒ်များပါဝင်သည်နှင့်အကျိုးသက်ရောက်စေလုပ်ငန်းဆောင်တာအဖြစ်ဆက်စပ်လက်တွေ့အလုပ်မဖြစ်အမျိုးမျိုးနှင့်ဆက်စပ်သောပါပြီ။
Stewart က DN, Szymanski DM တစ်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ချစ်ခင်လေးမြတ်၏ Correlate, ဆက်ဆံရေးအရည်အသွေးနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုအဖြစ်သူတို့ရဲ့အမျိုးသားရိုမန်းတစ်အဖော်ရဲ့ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံသုံးစွဲမှု Young ကအရွယ်ရောက်အမျိုးသမီးများအစီရင်ခံစာများ in လိင်အခန်းကဏ္ဍ။ 2012 မေလ 6; 67 (5-6): 257-71 ။ (ပင်မ)
ညစ်ညမ်းအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု '' ယဉ်ကျေးမှုအပါအဝင်ကမ္ဘာတစ်လွှားယဉ်ကျေးမှုများစွာအတွက်ပျံ့နှံ့နေတဲ့နှင့်စံတန်ဖိုးနှစ်ဦးစလုံး၏, သို့သော်နည်းနည်းကသူတို့အထီးမိတ်ဖက်ညစ်ညမ်းရှုမြင်သောလိင်ကွဲရင်ခုန်စရာဆက်ဆံရေးတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူအမျိုးသမီးတွေအပေါ်ရှိသည်နိုင်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်စပ်ဆိုးကျိုးများအကြောင်းကိုလူသိများသည်။ ဤလေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာမိမိတို့၏လိင်ကွဲအမျိုးသမီးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ဆက်စပ် 308 ငယ်ရွယ်အရွယ်ရောက်ပြီးသူကောလိပ်ကျောင်းမိန်းမတကာတို့ထက်ကောင်းစွာဖြစ်ခြင်းအပေါ်, အကြိမ်ရေများနှင့်ပြဿနာအသုံးပြုမှုကိုနှစ်ဦးစလုံးယောက်ျားရဲ့အညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားဆက်ဆံရေးကိုဆန်းစစ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ ထို့အပြင်ခံစားအဖော်ရဲ့ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှုစကေးများအတွက် psychometric ဂုဏ်သတ္တိများထောက်ပံ့ပေးလျက်ရှိသည်။ သင်တန်းသားများကိုအမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ကြီးမားသောတောင်ပိုင်းအများပြည်သူတက္ကသိုလ်စုဆောင်းကာအွန်လိုင်းစစ်တမ်းကောက်ပြီးမြောက်ခဲ့သည်။ ရလဒ်များညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဟာသူတို့ရဲ့အထီးမိတ်ဖက်ရဲ့ကြိမ်နှုန်းအမျိုးသမီးရဲ့အစီရင်ခံစာများအဆိုးသူတို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကိုရညျအသှေးနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်ဖော်ပြခဲ့တယ်။ ညစ်ညမ်း၏ပြဿနာအသုံးပြုမှုကိုပိုမိုသဘောထားအမြင်အဆိုး Self-လေးစားမှု, ဆက်ဆံရေးဟာအရည်အသွေး, နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှုဆက်နွယ်နေကြောင်းခဲ့သည်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, Self-လေးစားမှုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမိတ်ဖက်ရဲ့ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်ဆက်ဆံရေးဟာအရည်အသွေးသဘောထားအမြင်များအကြားဆက်ဆံရေးကမကထပြုခဲ့။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ရလဒ်များကိုဆက်ဆံရေးဟာအရှည်ရှည်ဆက်ဆံရေးဟာအရှည်နှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသိသိသာသာမကျေနပ်မှုနှင့်အတူမိတ်ဖက်ရဲ့ပြဿနာညစ်ညမ်းအသုံးပြုခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျေနပ်မှု၏သဘောထားအမြင်များအကြားဆက်ဆံရေးတည်းဖြတ်ကြောင်းထုတ်ဖော်ပြောကြားခဲ့သည်။
နေရောင်ကို C, Bridges တစ်ဦးက, Johnason J ကိုနှင့် Ezzell M က ညစ်ညမ်းနှင့်အမျိုးသားလိင် Script: An စားသုံးမှုလေ့လာခြင်းနှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေး in အွန်လိုင်းပထမဦးစွာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ၏မော်ကွန်း: 03 ဒီဇင်ဘာလ 2014, စစ 1-12 ။ (ကျန်းမာရေး)
ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပညာရေး၏အဓိကအရင်းအမြစ်ဖြစ်လာသည်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ခေတ်ရေစီးကြောင်းစီးပွားဖြစ်ညစ်ညမ်းအကြမ်းဖက်မှုနှင့်အမျိုးသမီးပျက်စီးခြင်းပတျသကျတဲ့အတော်လေးတသားတည်း script ကိုလှည့်ပတ် coalesced သိရသည်။ သို့သျောလညျး, အနည်းငယ်သာအလုပ်ညစ်ညမ်းခြင်းနှင့် dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံအကြားအသင်းအဖွဲ့များရှာဖွေစူးစမ်းပြုမိခဲ့ပြီး: တစ်လူနှင့်အမျိုးသမီးတစ်ဦးအကြားအမှန်တကယ်ကမ္ဘာလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံအတွင်း၌ညစ်ညမ်းကစားဘာအခန်းကဏ္ဍ? သိမှု script ကိုသီအိုရီမီဒီယာ script များဆုံးဖြတ်ချက်ချများအတွက်အလွယ်တကူလက်လှမ်း heuristic မော်ဒယ်ဖန်တီးစောဒကတက်သည်။ အသုံးပြုသူတစ်ဦးပိုမိုအပြုအမူများပိုမို embedded သူတို့အား codes တွေကိုသူတို့ရဲ့ကမ္ဘာ့အမြင်အခင်းအကျင်းအတွက်ဖြစ်လာကြပြီးစစ်မှန်သောဘဝအတွေ့အကြုံများအပျေါ၌ပြုမူဆောင်ရွက်အဲဒီ script များသုံးစွဲဖို့ရှိပါတယ်ပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်တစ်ဦးအထူးသဖြင့်မီဒီယာ script ကိုချောင်းမြောင်း။ ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းပြီးတော့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအတွေ့အကြုံများကိုလမ်းညွှန်တစ်ဦးလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ script ကိုဖန်တီးငြင်းခုန်။ ဒီစမ်းသပ်ဖို့ကျနော်တို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဦးစားပေးများနှင့်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများနှင့်အတူညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုဟာသူတို့ရဲ့နှုန်းကိုနှိုင်းယှဉ်ဖို့အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု၌ 487 ကောလိပ်ယောက်ျား (အသက်အရွယ်မရွေး 18-29 နှစ်) စစ်တမ်းကောက်ယူ။ ရလဒ်များပိုမိုဖြစ်နိုင်ဖွယ်မိမိလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်စိုးရိမ်ပူပန်မှုများ, လိင်ကာလအတွင်းအသုံးပြုရန်သူ့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ၏အထူးသဖြင့်ညစ်ညမ်းလိင်အပြုအမူကိုတောင်းဆို, တမင်တကာ arousal ကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့လိင်စဉ်အတွင်းညစ်ညမ်းပုံတွေကို conjure နှင့်ရှိသည်ဖို့ခဲ့တယ်, လူကိုချောင်းမြောင်းပိုမိုညစ်ညမ်းပြသ ပုံရိပ်။ ထို့ပြင်ပိုမိုမြင့်မားညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုကိုအဆိုးတနာတစ်ဦးနှင့်အတူလိင်ကရငျးနှီးအပြုအမူတွေကိုခံစားနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ညစ်ညမ်းလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေ့ဆုံစဉ်အတွင်းယောက်ျားရဲ့မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အပြုအမူများတွင်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရသောအစွမ်းထက် heuristic မော်ဒယ်ကိုထောက်ပံ့ပေးကြောင်းကောက်ချက်ချ။
နေရောင်ကို C, Miezan အီး, Lee ကနယူးယော့နှင့်ရှိန်းပြား JW ကိုရီးယားအမျိုးသားများရဲ့ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအသုံးပြုမှု, Extreme ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံအတွက်သူတို့၏အကျိုးစီးပွားနှင့် Dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး in လိင်ကျန်းမာရေးအင်တာနေရှင်နယ်ဂျာနယ်, အတှဲ 27, Issue 1, 2015 စာမျက်နှာများ 16-35 ။ Doi: 10.1080 / 19317611.2014.927048 အွန်လိုင်း Published: 20 နိုဝင်ဘာ 2014 ။ (ကျန်းမာရေး)
ရည်ရွယ်ချက်များ: လေ့လာမှု၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ (ကြိမ်နှုန်းနှင့်အစွန်းရောက်ညစ်ညမ်းအတွက်အကျိုးစီးပွားနှစ်ခုလုံး) နှင့် dyadic လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်ဆံရေးညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှုအကြားဆက်သွယ်မှုများကိုအကဲဖြတ်ရန်ဖြစ်ခဲ့သည်။ နည်းလမ်းများ: ခြောက်ရာရှစ်-ငါးခုလိင်ကွဲတောင်ကိုရီးယားအထီးကောလိပ်ကျောင်းသားများကိုအွန်လိုင်းစစ်တမ်းများတွင်ပါဝင်ခဲ့။ ရလဒ်များ: ဖြေဆိုသူအများစု (84.5%) ညစ်ညမ်းကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ခြင်းနှင့်လိင်တက်ကြွခဲ့ကြတဲ့သူတွေကို (470 ဖြေဆိုသူ) အတွက်ကျနော်တို့စော်ကားသောသို့မဟုတ်အစွန်းရောက်ညစ်ညမ်းအတွက်ပိုမိုမြင့်မားအကျိုးစီးပွားနှင့်အတူညစ်ညမ်းထံမှအခန်းကဏ္ဍ-ကစားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင်ကွင်းများ၏အတွေ့အကြုံနှင့်ဆက်နွယ်ခဲ့ကွောငျးတှေ့ရှိ တစ်ဖက်နှင့်မိတ်ဖက်နှင့်အတူလိင်ဆက်ဆံကျော်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားအောင်မြင်ရန်ထိန်းသိမ်းနည်းညစ်ညမ်းသုံးပြီးများအတွက်ဦးစားပေး။ ကောက်ချက်: အဆိုပါတွေ့ရှိချက်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာကွဲပြားခြားနားမှုမှပေးဆောင်သင့်ကြောင်းအကြံပြု, တသမတ်တည်းပေမယ့်တူညီတဲ့နည်းစနစ်နှင့်အတူတစ်ဦးအမေရိကန်လေ့လာမှုကနေကွဲပြားခြားနားမှုနှင့်အတူရှိကြ၏။
Sutton KS, Stratton N ကို, Pytyck J ကို, Kolla NJ, Cantor JM 115 ဆက်တိုက်အမျိုးသားဖြစ်ပွားမှုတစ်ဦးကဘက်စုံဇယားကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း: Hypersexuality လွှဲပြောင်းအမျိုးအစားအားဖြင့်လူနာလက်ခဏာ in J ကိုလိင်အိမ်ထောင်ရေး Ther ။ 2015 Dec;41(6):563–80. (Home)
Svedin CG, Åkermanငါနှင့် Priebe, G ညစ်ညမ်း၏မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်။ ဆွီဒင်အထီးမြီးကောင်ပေါက်များ၏လူဦးရေကိုအခြေခံပြီး epidemiological လေ့လာမှု in ဆယ်ကျော်သက်များ၏ဂျာနယ်, အတှဲ 34, Issue 4, သြဂုတ်လ 2011, စာမျက်နှာများ 779-788 ။ Doi: 10.1016 / j.adolescence.2010.04.010 ။ (ကျန်းမာရေး)
ညစ်ညမ်း၏မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကိုလုံလုံလောက်လောက်မတိုင်မီလေ့လာခဲ့ရသေးပါ။ ဆွီဒင်စစ်တမ်းများတွင် 2015 နှစ်ပေါင်းအသက် 18 အထီးကျောင်းသားများကိုပါဝင်ခဲ့။ ညစ်ညမ်း (N ကို = 200, 10.5%) ၏မကြာခဏသုံးစွဲသူတစ်ဦးကအုပ်စုတစုနောက်ခံနဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဆက်စပ်မှုမှလေးစားမှုနှင့်အတူလေ့လာခဲ့ခဲ့ကြသည်။ အဆိုပါမကြာခဏအသုံးပြုသူများသည်ညစ်ညမ်းတစ်ဦးထက်ပိုသောအပြုသဘောခဲ့ ပို. မကြာခဏညစ်ညမ်းကြည့်ရှု "ပေါ်တွင်လှည့်" နဲ့မကြာခဏညစ်ညမ်း၏အဆင့်မြင့်ပုံစံများကိုကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြသည်။ မကြာခဏအသုံးပြုခြင်းကိုလည်းအများအပြားပြဿနာအပြုအမူတွေနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ တစ်ဦးကမျိုးစုံ Logistic ဆုတ်ယုတ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာညစ်ညမ်း၏မကြာခဏအသုံးပြုသူများသည် သာ. ကြီးမြတ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ပိုပြီးမကြာခဏတူညီတဲ့အသက်အရွယ်၏အခြားယောက်ျားလေးများထက်လိင်ရောင်းရှိခြင်း, ပိုမိုမကြာခဏအရက်စားသုံး, ကြီးမားတဲ့မွို့တှငျနထေိုငျခံရဖို့ပိုများပါတယ်ဖြစ်ကြောင်းပြသခဲ့သည်။
ညစ်ညမ်းမြင့်မားမကြာခဏကြည့်ရှုမိဘများနှင့်ဆရာ, ဆရာမနှစ်ဦးစလုံးမှ ပို. အာရုံစူးစိုက်မှုလိုအပ်ကြောင်းနှင့်လည်းလက်တွေ့အင်တာဗျူးအတွက်ဖြေရှင်းခံရဖို့တဲ့ပြဿနာအပြုအမူအဖြစ်ရှုမြင်နိုင်ပါသည်။
Valliant, GE အတွေ့အကြုံ၏အောငျမွငျ: အဟားဗတ် Grant ကလေ့လာမှု၏အမျိုးသားများအတွက်။ 2012 ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်ကသတင်းထုတ်။ ISBN 9780674059825 ။ (ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး)
ကမ္ဘာတဝှမ်းကလူများစွာဟာသူတို့ရဲ့ဆယ်ဘို့တဘို့ဆယ်စုနှစ်သို့နေထိုင်နေကြသည့်အခါတစ်ဦးထိုအချိန်တွင်အစဉ်အဆက်ဆောင်ရွက်လူသားဖွံ့ဖြိုးမှု၏အရှည်ဆုံး longitudinal လေ့လာမှုအသစ်အအဟောင်းအသက်အရွယ်တချို့ကြိုဆိုသတင်းကမ်းလှမ်း: ကျွန်ုပ်တို့၏အသက်တာကျွန်ုပ်တို့၏နောက်ပိုင်းနှစ်များတွင်တဖြည်းဖြည်းတိုးတက်ပြောင်းလဲဆက်လက်နှင့်မကြာခဏပိုပြီးပြည့်စုံရာဖြစ်လာ အရင်ကထက်။
1938 အတွက်စတင်နေပြီ, အရွယ်ရောက်ဖွံ့ဖြိုးရေးကောင်စီ၏ Grant ကလေ့လာ၎င်းတို့၏ဘွဲ့ကြိုရက်ပေါင်းနှင့်အတူစတင်ကျော် 200 ယောက်ျားများ၏ရုပ်ပိုင်းနှင့်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးမည့်အကြောင်းအားတက်သရောပြောခဲ့သည်။ ဘဝကရန်ယခု-ဂန္လိုက်လျောညီထွေတက်အသက်အရွယ် 55 ဖို့ယောက်ျားရဲ့ဘဝအပေါ်အစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့်ကျွန်တော်တို့ကိုအရွယ်ရောက်ပြီးသူရငျ့နားလည်ကူညီပေးခဲ့သည်။ အခုတော့ဂျော့ခ်ျ Vaillant ဝေးသမားရိုးကျအငြိမ်းစားကျော်လွန်လန်းတူသောအရာကိုပထမဦးဆုံးအကြိမ်မှတ်တမ်းတင်သူတို့၏ကိုးဆယ်ထဲသို့ယောက်ျားအောက်ပါအတိုင်း။
အံ့သြစရာတွေ့ရှိချက်များ၏အရေအတွက်အတွေ့အကြုံရှယ်ယာအောငျနိုငျ, (၎င်း၏အလွဲသုံးစားမှုဝေးအားဖြင့်လေ့လာမှုရဲ့ဘာသာရပ်များများအတွက်ကျန်းမာရေးနှင့်ပျော်ရွှင်မှုကို၏အကြီးမားဆုံးသော disruptor ဖြစ်ခြင်း), ဆက်ဆံရေးအပါအဝင်အထီးအသက်ရှည်သမျှရှုထောင့်, နိုင်ငံရေးနှင့်ဘာသာရေးအပေါ်အစီရင်ခံမဟာဗျူဟာများကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း, အရက်သေစာသုံးစွဲခြင်း။ ဥပမာအားဖြင့်, အသက်ကြီးကောင်းသောအမှုကိုပြုသူကလူသေချာပေါက် midlife နှင့်အပြန်အလှန်အတွက်ဒါကောင်းစွာမလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါဘူး။ လေ့လာမှုတစ်ခုမကောင်းဘူးလို့ကလေးဘဝထဲကနေပြန်လည်နာလန်ထူနိုငျကွောငျးအတည်ပြုနေစဉ်, ပျြောရှငျတဲ့ကလေးဘဝအမှတ်တရများအစွမ်းသတ္တိ၏ရာသက်ပန်အရင်းအမြစ်ဖြစ်ကြသည်။ လက်ထပ်ထိမ်းမြားအသက်အရွယ် 70 ပြီးနောက်ပိုပြီးရောငျ့ရဲသို့ဆောင် ခဲ့. , 80 ပြီးနောက်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအိုမင်းကြိုတင်အသက်အရွယ် 50 ဖွဲ့စည်းအလေ့အထများအားဖြင့်ထက်မျိုးရိုးအလိုက်အားဖြင့်လျော့နည်းဆုံးဖြတ်သည်။ ကျေးဇူးတော်နှင့်တက်ကြွနှင့်အတူဟောင်းကြီးထွားလာများအတွက်အကြွေးကြောင့်ပုံရသည်, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြယ်မျိုးရိုးဗီဇမိတ်ကပ်ဖို့ထက်ကိုယျ့ကိုယျကိုပိုမိုတတ်၏။
Voon V ကို, မှဲ့တီဘီ, BANCA P ကို, Porter L ကို, မောရစ် L ကို, Mitchell က S နဲ့, et al ။ နှင့် compulsive လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူမပါဘဲပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ Cue reactivity ၏အာရုံကြောဆက်စပ် in PLoS ONE ။ : 2014 ဇူလိုင် 11;9(7): e102419 ။ (ပင်မ)
အတင်းအကျပ်ပြုတတ်သောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအပြုအမူ (CSB) ကို "အမူအကျင့်" စွဲခြင်းနှင့်ဘုံသို့မဟုတ်ထပ်အာရုံကြောဆားကစ်အဖြစ် conceptualized ထားပြီးဖြစ်သော်လည်းသဘာဝအလျောက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးဆုလာဘ်၏အပြောင်းအလဲနဲ့အုပ်ချုပ်စေခြင်းငှါ, နည်းနည်း CSB နှင့်မပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပစ္စည်းများဖို့တုံ့ပြန်မှုနှင့် ပတ်သက်. လူသိများသည်။ ဒီနေရာမှာကွဲပြားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းအရာတွေကိုများ၏အပြောင်းအလဲနဲ့မူးယစ်ဆေး-cue reactivity ကို၏ကြိုတင်လေ့လာမှုများအတွက်ဖော်ထုတ်အာရုံကြောဒေသများအာရုံစိုက်, CSB နှင့်မပါဘဲတစ်ဦးချင်းစီအတွက်အကဲဖြတ်ခဲ့သည်။ 19 CSB ဘာသာရပ်များနှင့် 19 ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်း Non-လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ဗီဒီယိုများနှင့်အတူလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဒီယိုများနှိုင်းယှဉ်အလုပ်လုပ်တဲ့ MRI သုံးပြီးအကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်အကြိုက်၏ ratings ရယူခဲ့ကြသည်။ ကျန်းမာစေတနာ့ဝန်ထမ်းမှဆွေမျိုး, CSB ဘာသာရပ်များအတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဗီဒီယိုများတုံ့ပြန် သာ. ကြီးမြတ်အလိုဆန္ဒပေမယ့်အလားတူအကြိုက်ရမှတ်များရှိခဲ့ပါတယ်။ Non-CSB ဘာသာရပ်များနှိုင်းယှဉ် CSB အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုထိတွေ့သည့် dorsal anterior cingulate ၏ activation, ventral striatum နှင့် amygdala နှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ dorsal anterior cingulate-ventral striatum-amygdala ကွန်ယက်၏ functional ဆက်သွယ်မှုပုဂ္ဂလဒိဋ္လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလိုဆန္ဒနှင့်ဆက်စပ် (သို့သော် like နှိပ်မဟုတ်) Non-CSB ဘာသာရပ်များမှ CSB ဆွေမျိုးတစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောဘွဲ့မှခဲ့သည်။ အလိုဆန္ဒသို့မဟုတ်လိုသောနဲ့အကြိုက်အကြား dissociation အတွင်းမူးယစ်ဆေးဝါးသုံးစွဲမှု၌ရှိသကဲ့သို့ CSB အခြေခံမက်လုံးပေးလှုံ့ဆျောမှု၏သီအိုရီနှင့်ကိုက်ညီသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ-cue reactivity ကို၏အပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အာရုံကြောကွဲပြားခြားနားမှုယခင်ကမူးယစ်ဆေးဝါး-cue reactivity ကိုလေ့လာမှုများအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရဒေသများတွင် CSB ဘာသာရပ်များအတွက်ဖော်ထုတ်ခဲ့ကြသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုထိတွေ့အောက်ပါ CSB အတွက် corticostriatal limbic circuitry ၏ သာ. ထိတွေ့ဆက်ဆံမှုအာရုံကြော CSB အခြေခံယန္တရားနှင့်ကြားဝင်များအတွက်အလားအလာဇီဝပစ်မှတ်အကြံပြုထားသည်။
ရက်ကန်း JB, ရက်ကန်းအက်စ်အက်စ်, Mays: D, Hopkins GL, Kannenberg W က, McBride: D စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးညွှန်းကိန်းများနှင့်လူကြီးများအားဖြင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအသုံးပြုမှုအပြုအမူ in လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဆေးပညာဂျာနယ်။ 2011 Mar;8(3):764–72.
နိဒါန်း:; တွင် HIV / STD ကူးစက်မြင့်မားအန္တရာယ်များကိုပါဝင်ပတ်သက်နေကြောင်းအများကြီး, အန္တရာယ်များလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးသဘောထားအမြင်နှင့်အပြုအမူနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ယဉ်ကျေးမှုကွဲပြားခြားနားအခင်းအကျင်းထဲကနေစုဆုံသက်သေအထောက်အထားလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာမီဒီယာအသုံးပြုမှုအပြုအမူ (ဆိုလိုသည်မှာ, ညစ်ညမ်းစားသုံးမှု SEMB) ထိုဖော်ပြသည်။
AIM: အမှန်ကတော့ unexplored နှင့်ဒီမှာအာရုံ, SEMB နှင့် nonsexual mental- နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးညွှန်းကိန်းများအကြားအလားအလာဆက်ဆံရေးဖြစ်ကြသည်။
အဓိကရလဒ်ကိုတိုင်းတာခြင်း: ခြောက်လစဉ်ဆက်မပြတ်တိုင်းတာကျန်းမာရေးညွှန်းကိန်းများတွင် variable (စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာများ, mental- နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးလျော့ရက်ပေါင်း, ကျန်းမာရေးအခြေအနေ, အသက်တာ၏အရည်အသွေး, နှင့်ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်း) နှစ်ခုအဆင့်ဆင့် SEMB ၏ (သုံးစွဲသူများ nonusers) ကိုဖြတ်ပြီးလေ့လာခဲ့သည်။
နည်းနာ: 559 ဆီယက်တဲလ်-Tacoma အင်တာနက်ကိုအသုံးပြုပြီးအရွယ်ရောက်သူတစ်ဦးကနမူနာ 2006 အတွက်စစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့သည်။ တုံ့ပြန်ကျား, မတစ်ဦး SEMB အတွက် parameterized Multivariate ယေဘုယျ linear မော်ဒယ်များ (2 × 2) factorial ဒီဇိုင်းပေါင်းများစွာအသက်အပိုင်းအခြားများအတွက်ချိန်ညှိထည့်သွင်းတွက်ချက်ခဲ့ကြသည်။
နမူနာ၏ SEMB 36.7% အားဖြင့်အစီရင်ခံတင်ပြခဲ့ပါသည် (ဎ = 205): ရလဒ်။ အများစုမှာ SEMB အသုံးပြုသူများသည် (78%) လူဖြစ်ကြ၏။ nonusers နှိုင်းယှဉ်အသက်အပိုင်းအခြား, SEMB သုံးစွဲသူများအဘို့အညှိပြီးနောက်အသက်ဆင်းရဲတဲ့အရည်အသွေးကိုပိုမို mental- နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးလျော့ရက်နှင့်အောက်ပိုင်းကျန်းမာရေးအဆင့်အတန်းကို သာ. ကြီးမြတ်စိတ်ကျရောဂါလက္ခဏာတွေကဖော်ပြခဲ့သည်။
နိဂုံးများ - တွေ့ရှိချက်များအရ SEMB တွင်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးညွှန်းကိန်းများသည်သိသာစွာကွဲပြားပြီး၊ ဤအချက်များကိုအနာဂတ်သုတေသနနှင့်အစီအစဉ်ကြိုးပမ်းမှုများတွင်ထည့်သွင်းခြင်း၏တန်ဖိုးကိုဖော်ပြသည်။ အထူးသဖြင့်တွေ့ရှိချက်များအရတစ် ဦး ချင်းစီ၏ SEMB နှင့်သူတို့၏စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်များကိုတစ်ပြိုင်နက်တည်းဖော်ပြသည့်သက်သေပြချက်အခြေပြုလိင်ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ရေးမဟာဗျူဟာများသည်စိတ်ကျန်းမာရေးကိုတိုးတက်စေရန်နှင့် SEMB နှင့်ဆက်စပ်သည့်ကာကွယ်နိုင်သောလိင်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာရလဒ်များကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်အသုံးဝင်သောနည်းလမ်းဖြစ်နိုင်သည်။
Weber က M, Quiring အိုနှင့် Daschmann, G ရွယ်တူချင်း, မိဘများနှင့်ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ: လိင်အကဲဆတ်သောပစ္စည်းမှပြုစုပျိုးထောင်ခြင်း '' ထိတွေ့စူးစမ်းခြင်းနှင့်၎င်း၏ Developmental ဆက်စပ်မှု in လိင် & ယဉ်ကျေးမှုဒီဇင်ဘာ 2012, အတှဲ 16, Issue 4, စစ 408-427 ။ (ကျန်းမာရေး)
352 နှင့် 16 နှစ်ကြား 19 ဆယ်ကျော်သက်တစ်ဦးအွန်လိုင်းစစ်တမ်း၏အခြေခံတွင်, ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုနှင့်ရုပ်ရှင်၏အသုံးပြုမှုကိုမြီးကောင်ပေါက် '' ရိပ်မိကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်, သက်တူရွယ်တူအုပ်စုသည်သြဇာလွှမ်းမိုးမှုများနှင့်လိင်၏အယူအဆတွေ၏ဤအသုံးပြုခြင်းနှင့်ညွှန်းကိန်းများအကြားဆက်သွယ်မှုနှင့်အတူစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့သည်။ ကျနော်တို့အများကြီးမြီးကောင်ပေါက်မှန်မှန်ညစ်ညမ်းဗီဒီယိုသို့မဟုတ်ရုပ်ရှင်အသုံးပြုတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။ ပိုပြီးမကြာခဏသူတို့ကိုယ်သူတို့ညစ်ညမ်းအသုံးပြုနိုင်သည်, အထူးသဖြင့်သူတို့၏မိဘများ, ၎င်းတို့၏ပတ်ဝန်းကျင်၏လျော့နည်းလွတ်လပ်သောအဖြစ်မိမိတို့ကိုယ်ကိုမှတ်သောသူသည်ဖြေဆိုသူ။ သူတို့အထူးသဖြင့်ကျယ်ပြန့်ကဲ့သို့၎င်း, ယောက်ျားလေးများအဘို့မိမိတို့ရွယ်တူအုပ်စုတစ်စုအတွင်းအသုံးပြုခြင်းကိုအကဲဖြတ်ရန်လျှင်သူတို့မကြာခဏသူတို့ရဲ့သက်တူရွယ်တူအုပ်စုတစ်စုအတွင်းညစ်ညမ်းဆွေးနွေးရန်လျှင်မိန်းကလေးများအဘို့, ဒီကိုလည်းသက်ဆိုင်ပါသည်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာတို့၏စားသုံးမှုတစ်ဦးကအဆင့်မြင့်မီဒီယာကိုလည်းလူတွေကယေဘုယျအားအစောပိုင်းကအသက်တာ၌လိင်ဆက်ဆံခြင်းရှိသည်နှင့်လူပေါင်းယေဘုယျအားဖြင့်ပိုပြီးမတူညီလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနည်းစနစ်မျက်နှာသာကြောင်းကို၎င်းယူဆချက်နှင့်အတူလက်၌လက်တတ်၏။
Wilson က, ဂယ်ရီ 2014 Porn တွင်သင့်ရဲ့ဦးနှောက်: အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံနှင့်စွဲမှု၏ & Emerging သိပ္ပံ, ဓနသဟာယထုတ်ဝေရေး ISBN 978-0-9931616-0-5
"Porn ပေါ်မှသင့်ဦးနှောက်ကျွမ်းကျင်သူနှင့် layperson ရောနှောများအတွက်သင့်လျော်သောရိုးရှင်းသောရှင်းရှင်းလင်းလင်းဘာသာစကား၌ရေးထားလျက်ရှိ၏နှင့် neuroscience, အမူအကျင့်စိတ်ပညာနှင့်အီဗိုလူးရှင်းသီအိုရီ၏အခြေခံမူအတွင်းခိုင်မြဲစွာအမြစ်တွယ်နေသည် ... တစ်ဦးစမ်းသပ်စိတ်ပညာရှင်အဖြစ်, ငါလှုံ့ဆျောမှုများ၏အခြေစိုက်စခန်းများသုတေသနပြုလေးဆယ်နှစ်ကျော်ကုန်ရပြီ ငါပြောချင်ရဲ့သုံးသပ်ချက်ငါတွေ့ပြီသောသူအပေါင်းတို့သည်အလွန်ကောင်းစွာကိုက်ညီကြောင်းအတည်ပြုရန်နိုင်တယ်။ "
ပါမောက္ခဖရက်ဒရစ် Toates, ပွင့်လင်းတက္ကသိုလ်, Desire အလုပ်လုပ်ဘယ်လိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရေးသားသူ: ထူးခြားတဲ့တိုက်တွန်းကြသည်။
Wright PJ, Sun ကကို C, Steffen NJ နှင့် Tokunaga သည် RS ညစ်ညမ်း, အရက်နှင့်အမျိုးသားလိင် Dominic ဆက်သွယ်ရေး Monographs Volume ကို 82, Issue 2, 2015 စာမျက်နှာများ 252-270 ၌တည်၏။ အွန်လိုင်း Published: 19 နိုဝင်ဘာ 2014 ။ Doi: 10.1080 / 03637751.2014.981558 ။ (ကျန်းမာရေး)
ဒီလေ့လာမှုကဂျာမန်လိင်တူဆက်ဆံသူအမျိုးသားတွေရဲ့စိတ်ဝင်စားမှုနဲ့ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေတွေကိုလေ့လာဆန်းစစ်မှုတွေမှာလွှမ်းမိုးထားတဲ့အပြုအမူအမျိုးမျိုးမှာပါဝင်ပတ်သက်မှုကိုစစ်တမ်းကောက်ယူခဲ့တယ်။ ရေပန်းစားသောညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ရှုခြင်းသို့မဟုတ်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံစာပေများကိုမကြာခဏစားသုံးခြင်းကိုအမျိုးသားများကဆံပင်ဆွဲခြင်း၊ ဆံပင်ဆွဲခြင်း၊ မျက်နှာမျက်နှာကြက်သွေးကြောပိတ်ခြင်း၊ မျက်နှာပိတ်ခြင်း၊ ဆိုလိုသည်မှာမိတ်ဖက်တစ် ဦး ၏စအိုသို့မဟုတ်ယောနိကိုအခြားသူတစ် ဦး နှင့်တစ်ပြိုင်တည်းထိုးဖောက်ခြင်း၊ မြည်း - ပါးစပ် (ဆိုလိုသည်မှာမိတ်ဖက်အားထိုးဖောက်သူကိုထိုးဖောက်ပြီးလိင်တံကိုသူ၏ပါးစပ်ထဲသို့ထိုးသွင်းခြင်း)၊ လိင်တံထိုးနှက်ခြင်း၊ မျက်နှာနှင့်ပါးရိုက်ခြင်း၊ မွန်းကျပ်ခြင်းနှင့်အမည်ခေါ်ခြင်း (ဥပမာ“ slut "သို့မဟုတ်" ပြည်တန်ဆာ ") ။ လိင်မှုဆိုင်ရာအကျပ်ကိုင်မှုဖြစ်နိုင်ခြေအပေါ်အရက်သောက်ခြင်းနှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများဖော်ပြခြင်း၏အကျိုးသက်ရောက်မှုအပေါ်ယခင်လေ့လာခဲ့သောသုတေသနနှင့်ကိုက်ညီသည်မှာအကြီးအကျယ်ပြုမူသောအပြုအမူများတွင်ပါ ၀ င်ခဲ့သည့်အမျိုးသားများသည်အပြာစာပေရုပ်ပုံများကိုမကြာခဏသုံးစွဲလေ့ရှိပြီးလိင်မတိုင်မီနှင့်လိင်ဆက်ဆံစဉ်အရက်ကိုပုံမှန်သောက်သုံးခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်။